အပြိုင်အဆိုင် – Hlataw.com
ဦးရဲသူ ညွှန်ပြသည့် ကုတင်ခြေရင်းကို လှမ်းကြည့်လိုက်စဉ်တွင် သူမကိုယ်လေးအား နောက်မှ တွန်းခြင်းကို လိုက်ရသည်။ ဘာလုပ်တာလဲဟု လှမ်းမေးလိုက်စဉ်မှာပင် ဦးရဲသူ ကိုယ်ကနောက်ကနေ ပိကျလာသည်။ ၀မ်းလျားလေးမှောက်သွားသည့် ရွှေပိုးအိမ်ကိုယ်ပေါ်တွင် ဦးရဲသူရဲ့ အ၀တ်မဲ့ကိုယ်က ထပ်နေသည်။ အတွင်းခံအောက်မှ ထွားကျိုင်းသည့်အကောင်ကြီးသည် သူမရဲ့ တင်ပါးလုံးလုံးလေးပေါ် ထောက်ကာနေသည်။ ရွှေပိုးအိမ် စိတ်တွေ ကတုန်ကယင် ဖြစ်သွားသည်။ “အာ .. ဆရာ .. မလုပ်နဲ့ .. စာကြောင်းပေကြောင်း ဆွေနွေးနေတာ ဒါမျိုး မလုပ်နဲ့” (ကိုယ်ကလေးကို တွန့်၍ ရုန်းပေမယ့် ဦးရဲသူက သူမလက်တွေကို ချုပ်၍ ဖိထားရာ ရုန်းထွက်လို့မရချေ) “တကယ်တော့ မင်း ရေးတာ ကောင်းပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ဖီလင်မပါသလိုပဲ .. စာအဖြစ်ရေးနေတယ်ဆိုတာပဲ ရှိတယ် .. စိတ်လှုပ်ရှားမှု မရှိဘူး .. မင်းရဲ့ ဘ၀လိုပဲ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ဖြစ်နေတယ်” ဒီစကားက သူမရင်ထဲကို ကိုင်လှုပ်လိုက်သဖြင့် ရွှေပိုးအိမ် ငြိမ်ကျသည်။ ဦးရဲသူက ဒီအချက်ကို အပြည့်အ၀အသုံးချကာ သူမကိုယ်လေးအား ကျောပြင်တလျှောက် တရွှတ်ရွှတ်နမ်းရင်း အောက်ဘက်သို့ ဆင်းသွားသည်။ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကို ကျော်၍ တင်ပါးလုံးလုံးဖွေးဖွေးနား အရောက်တွင် ပင်တီလေးအား အရင်လိပ်ချသည်။ ပြီးမှ နူးညံ့လှသည့် တင်သားတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို နမ်းရင်း ဖင်ကြားကမြောင်းလေးအတိုင်း လျှာပြားကို ထိုးထည့်လိုက်သည်။
“အာ့ … ဆရာ .. မလုပ်နဲ့ .. မရွံမရှာနဲ့ ကွာ” (ရွှေပိုးအိမ် အသက်ရှူသံမြန်လာပြီး ငြင်းဆန်သည့်အသံက အားမပါတော့ပေ) “ငြိမ်ငြိမ်နေ အဲဒီအတိုင်း” (တင်ပါးလုံးလုံးလေး နှစ်ဖက်အား ခွ၍ ဖိထိုင်လိုက်ရင်း ဦးရဲသူပြောသည်) “ဆရာ အရမ်းမလုပ်နဲ့နော်” “မလုပ်ဘူး .. ဟောဒီမှာ သာသာလေး” (ဖင်ကြားကနေ ပြူတစ်တစ် ပေါ်နေသည့် အဖုတ်ဝလေးအား လီးဒစ်ကိုထောက်ရင်း ဖိသွင်းလိုက်သည်) “အာ့ .. ဒါလား သာသာလေး … အထဲမှာ အောင့်သွားတယ်” “လျှာရှည်မနေနဲ့ .. နားထောင် .. ဒီမှာ အနှစ်တွေပေးတော့မှာ” “အာ့ .. ဘာ .. အာ့ .. အနှစ်လဲ” “ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက် သုံးမယ်ဆိုရင် အဲဒီ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ကာရိုက်တာကို အဆုံးစွန်ရောက်အောင် မောင်းပေးရတယ် .. လုံးဝ ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့ အထိပဲ .. ဒါပေမယ့် မင်းဇာတ်လမ်းမှာ ဇာတ်ကောင်မပြောနဲ့ .. စာရေးသူကိုယ်တိုင်တောင် သူဘာရေးချင်နေလဲဆိုတာ မသဲကွဲဘူး .. ဇာတ်လမ်းက ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ဖြစ်နေတာ အဲဒါကြောင့်ပဲ ..” “ဆရာ နောက်မှ ပြောတော့ .. ဆောင့် .. ဆောင့်ပေး .. အာ့” (ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် ၀င်လာသည့် အတန်ကြီးကြောင့် ရွှေပိုးအိမ်စိတ်တွေ ဆူဝေတက်လာသည်)“တိတ်တိတ်နေ .. မင်း သိထားဖို့ သမ္မာကျမ်းစာထဲက စကားတစ်ခွန်းကို ပြောမယ် .. ဘုရားသခင် က ပြောဖူးတယ် .. မင်းတို့ဟာ အေးတာလည်းမဟုတ်၊ ပူတာလည်း မဟုတ်ဘဲ .. ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ဖြစ်နေရင် ပါးစပ်ထဲကနေ ထွေးထုတ်ပစ်ရမှာပဲတဲ့ .. အဲဒီတော့ ဆရာ ပြောချင်တာက .. အဓိက ဇာတ်လိုက်က ဓါတ်ခွဲခန်းပညာရှင်ဆိုမှတော့ .. လူသတ်ဖို့နေရာမှာ အဆိပ်ကိုပဲ သုံးရမှာပေါ့ .. ဒါမှ သဘာဝကျမှာ ..ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပတ်ချာလည် စဉ်းစားပြီး ဝေခွဲမရ ဖြစ်မနေစေချင်ဘူး .. သဘောပေါက်လား ရွှေပိုးအိမ်” “ဟုတ် .. ဟုတ်ကဲ့ … အာ့ .. အာ့” (ဦးရဲသူရဲ့ ဆောင့်ချက်များက ပိုမိုပြင်းထန်လာသည့်အတွက် ရွှေပိုးအိမ် အသက်ရှုသံတွေ မှားလာသည်) “ဘုရားသခင်က ဘာပြောလဲ” (အားနှင့် တစ်ချက်ချင်း လီးကြီးကို ဖိဖိသွင်းသည်) “ပူပူ .. အေးအေး .. ထွက်အောင် .. ထုတ် .. ထုတ်ပစ်ရမယ့်တဲ့ …. အာ့ အာ့” “ဟုတ်တယ် … အား … ထွက် .. ထွက်ပြီ” ရွှေပိုးအိမ် တင်ပါးလုံးလုံးအိအိတွေနဲ့ သူ့ဆီးစပ် တဖတ်ဖတ်ရိုက်မိအောင် တရမ်းကြမ်း ဖိဆောင့်ရင်း ဦးရဲသူ အကောင်းကြီးကောင်းသွားသည်။ သူ့လီးကြီးအား ရစ်ပတ်ထားသည့် ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ အဖုတ်အတွင်းသားတွေသည်လည်း အဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားသည်။ အင်အားပြင်းသည့် လှိုင်းတံပိုးနှစ်ခု ပေါင်းဆုံသလို နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ အရည်များသည့် ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ အဖုတ်အတွင်း၌ ပြည့်လျှံကာ ရှိနေလေသည်။ စိုးသူဇာ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့  အပေါ်ဆုံးထပ်ရှိ သီးသန့်စားဖိုဆောင်ထဲတွင် ရဲဝေယံတစ်ယောက် အလုပ်များနေသည်။ သေသပ်ကျနစွာ ပြင်ဆင်ထားသည့် ထမင်းလိပ်လုံးလေးများကို ပန်းကန်ထဲတွင် အသည်းပုံပေါ်အောင် အစီအရီ ထည့်သည်။ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနှင့် ဆရာမဖြစ်သူကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်စိုးသူဇာက သူနှင့်မလှမ်းမကမ်းရှိ စားပွဲခုံကျယ်ပေါ် မေးထောက်ရင်း သူ့အား ငေးကြည့်နေသည်။ တစ်ပတ်လျှိုဆံထုံးလေး ထုံးထားသဖြင့် ရှင်းသန့်နေသော ဆရာမရဲ့ မျက်နှာလေးသည် ၀င်းပနေပြီး သူ့ကို ကြည့်နေသော မျက်ဝန်းတွေက ရွှန်းလဲ့နေသည်။ ရဲဝေယံ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ မြန်လာပြီး ဆရာမစားဖို့ ပြင်ဆင်နေသည့် အလုပ်ကို မြန်မြန်လက်စသပ်သည်။
ရဲဝေယံနှင့် ဒေါ်စိုးသူဇာသည် တီဗွီပရိုဂရမ် ရိုက်ကူးရာဌာနတွင် အမှတ်မထင် အစွမ်းကုန် ရင်းနှီးသွားကြပြီးနောက်၊ သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဖွင့်ဟ မပြောပေမယ့် သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုး ရစ်တွယ်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ဖိုနှင့်မ ဖြစ်သည့်အပြင် နှစ်ယောက်စလုံး အချစ်ကိစ္စတွင် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားမို့ သူတို့နှစ်ယောက် ပွင့်လင်းမှုက မြန်ဆန်လှသည်။ ဆက်စ်ကိစ္စသည် အဆန်းတကြယ် ဖြစ်မနေတော့။ ရဲဝေယံက စလျှင်စ၊ မစလျှင် ဒေါ်စိုးသူဇာက အစပြုသည်သာ။ သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် တစ်ခုတည်းသော အခက်အခဲကား ဘယ်နေရာတွင် တွေ့ကြမလဲဆိုတာပင်။ ဒေါ်စိုးသူဇာ အဆင့်နှင့်က ဟိုတယ်တွေ ဘာတွေမှာ ချိန်းတွေ့ဖို့ ခက်ခဲသည်မို့၊ လတ်တလောတွင် အဆင်ပြေဆုံးအဖြစ် နှစ်ယောက်စလုံး အလုပ်လုပ်ရာ စားသောက်ဆိုင်တွင်သာ ကျိတ်ပုန်းခုတ်ခဲ့ကြသည်။ မီးဖိုချောင်က စားပွဲကြီးပေါ်တွင် ဒေါ်စိုးသူဇာကို တင်၍ လိုးခဲ့ပြီးသလို၊ ၀န်ထမ်းများ ရေချိုးဖို့ သတ်မှတ်ပေးထားသည့် အခန်းထဲတွင်လည်း လိုက်ကာကြီးကို ဆွဲပိတ်ပြီး အချစ်နလံထဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ယောက်သားက ပိပိရိရိ ရှိလှသဖြင့် အခုထက်ထိတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အနေအထားကို ဘယ်သူကမှ မရိပ်မိပါ။ တခါတရံတွင် ဘေးနားတွင် လူရှိနေလျှင်တောင် သူတို့နှစ်ယောက်က မသိမသာနှင့် အချင်းချင်း ဟိုနှိုက်ဒီနှိုက်လုပ်ကြသေးသည်။ ထိုသို့ ပါပလစ် တွင် ဆက်စ်လုပ်ရသည်က နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ဆန်းသစ်သော အတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးပေးနေသည့်အပြင်၊ လူများ မိသွားမလားဆိုသည့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုက ရှိနေရာ သူတို့နှစ်ယောက် ထိုအရသာတွင် မက်မောစွာခုံမင်နေသည်ဟု ဆိုလျှင်လည်း ရပေလိမ့်မည်။ “ဘယ်လိုလဲ ဆရာမ .. စားလို့ကောင်းလား … အရသာက??” ထမင်းလိပ်တစ်ခုကို တူနှင့်ညှပ်ကာ ကောက်ယူပြီးနောက် ပါးစပ်ထဲထည့် အရသာခံကာ ၀ါးနေသည့် ဒေါ်စိုးသူဇာအား ကြည့်ရင်း ရဲဝေယံ မအောင့်နိုင်ဘဲ မေးခွန်းထုတ်မိသည်။
ဒေါ်စိုးသူဇာက အသေအချာ ၀ါးနေရင်းမှ သူ့အား မျက်လုံးအရင် ပြူးပြသည်။ ဘာသဘောလဲဟု မျက်မှောင်ကုတ်ပြီးကြည့်နေစဉ် ဆရာမရဲ့ လက်က မြောက်တက်သွားပြီး လက်မလေး ထောင်ပြသည်။ ရဲဝေယံ ဟေးခနဲ ထအော်သည်။ ဒေါ်စိုးသူဇာက သူ့အား သဘောကျသလို ပြုံးရယ်ကာ ကြည့်ရင်း ထိုင်ရာမှထလာသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ထမင်းစားပွဲနားတွင် လူချင်းပူးကပ်သွားသည်။ “အရမ်းတော်တာပဲ သားက .. ဆရာမက ထမင်းလိပ်ကို ဒီလိုလုပ်လို့ရမယ်မှန်း စဉ်းကို မစဉ်းစားမိဘူး” “မဟုတ်ပါဘူး ဆရာမရယ် .. ကျနော်က ဒီလိုနည်းကို စဉ်းစားမိတာတော့ ကြာပါပြီ .. ဒါပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းမှ သေချာတွေးမိတာပါ” “ဟင် .. ဘာဖြစ်လို့လဲ ??” ရဲဝေယံ စကားကို နားမလည်စွာနှင့် ဒေါ်စိုးသူဇာ မေးသည်။ သူမကို ကြည့်နေသည့် ရဲဝေယံ မျက်နှာက ပြုံးဖြီးဖြီး ဖြစ်နေသဖြင့် သူမစိတ်ထဲ သို့လောသို့လော ဖြစ်သွားသည်။ အခုတလော ကိုယ့်အသက်ကိုယ် ဆယ်နှစ်လောက် ပြန်ငယ်နေသလို ဒေါ်စိုးသူဇာ ခံစားနေရရာ အလိုလို နှုတ်ခမ်းစူသည်။ မျက်စောင်းတစ်ခုကို ဒိုင်းခနဲနေအောင် ထိုးသည်။ ရဲဝေယံက ဆရာမပုံစံအား သဘောကျသလို ကြည့်ရင်း ခေါင်းကုတ်ကာ သူ့အိုင်ဒီယာရသည့် အတွေးကို ရှင်းပြသည်။ “ထမင်းလိပ်ရဲ့ အထဲမှာ ကျူနာငါးအသားနီနီလေးကို ထည့်ထားတာ မဟုတ်လား .. ဆရာမသေချာကြည့်လေ .. ဘေးနားက အဖတ်လေးနှစ်ခုနဲ့ အလယ်ခေါင်က နီနီရဲရဲလေးဆိုတော့ ..” ရဲဝေယံက ဆက်ရှင်းမပြသဖြင့် ဒေါ်စိုးသူဇာ မျက်မှောင်လေးကျုံ့ ၍ အပြေးအလွှား စဉ်းစားမိသည်။ သူပြောချင်တာ ဘာမှန်း သိသွားသည့်အချိန်တွင် သူမမျက်နှာလေး တစ်ခုလုံး ဆေးနီနှင့်ဖြန်းသလို ရဲတွတ်သွားသည်။ “အယ် .. ကောင်စုတ်လေး .. ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် .. မင်းမို့လို့ ရှာရှာဖွေဖွေ တွေးတယ် .. မကောင်းဘူး .. မကောင်းဘူး .. လူဆိုးလေး ..” ရှက်ရမ်းရမ်းစွာ ပြောမိသည့်အပြင် အကျင့်ပါနေသည့်လက်က မြောက်တက်သွားပြီး ဒေါက်ခနဲမြည်အောင် ရဲဝေယံ နဖူးကိုခေါက်သည်။ ပြီးသည်နှင့် ကိုယ်ကလေးလှည့်ပြီး ချာခနဲ သူ့အနားမှ ထွက်သွားမည်ပြုသည်။ သို့သော် ရဲဝေယံက လက်သွက်လှသည်။ နဖူးထိပ်ကိုလက်တစ်ဖက်နှင့် ပွတ်နေပေမယ့် ကျန်သည့်လက်က ဆရာမအား လှမ်းဆွဲလိုက်သည်။
ဒေါ်စိုးသူဇာကိုယ်ကလေး တန့်သွားပြီး နောက်ပြန်လန်ကျသည်။ ရဲဝေယံက အဆင်သင့် စောင့်နေသည်မို့ သူ့ရင်ခွင်ထဲ တင်းတင်းရင်းရင်း ကိုယ်လုံးလေး ရောက်လာသည်။ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး တစ်ပတ်လျှို ဆံထုံးလေးကြောင့် ရှင်းသန့်နေသည့် လည်တိုင်လေးကို ဖိနမ်းသည်။ “အာ .. ကောင်လေး .. ဘာလုပ်တာလဲ??” (မျက်နှာလေး စောင်းကြည့်ရင်း ဒေါ်စိုးသူဇာ မူနွဲ့နွဲ့ပြောသည်) “ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ ဆရာမ သိသားနဲ့ .. ဘာလဲ မပေးချင်ဘူးလား” (ဂျီကျသည်စတိုင်နှင့် ပြောလိုက်ရင်း ဒေါ်စိုးသူဇာရဲ့ တင်ပါးဖြိုးဖြိုးကြီးတွေကို သူ့ဆီးစပ်နှင့် အတင်းဖိကပ်ထားသည်) “ဟွန်းနော် .. မင်းလေး .. တော်တော်ဆိုးတယ်” “ဆိုးတဲ့ကောင်ကို ပျော့သွားအောင် ဆုံးမရမှာ ဆရာမ အလုပ်မဟုတ်လား” စကားအဖြစ် ဒေါ်စိုးသူဇာကို ပြန်ထောက်လိုက်သလို၊ တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကြား ထောက်စပြုနေသည့် သူ့အကောင်ကြီးပေါ်သို့လည်း သူမလက်ကို ဆွဲ၍ တင်ပေးလိုက်သည်။ ဆရာမရဲ့ လက်က ချည်သားဘောင်းဘီပွအောက်မှ မာမာကြီး ဖြစ်နေသည့် လီးကို စမ်းမိသွားတွင်၊ ရဲဝေယံက သူ့လက်နှစ်ဖက်နှင့် ရှေ့ဘက်ပိုင်းက ရင်သားဖြိုးဖြိုးတွေကို လှမ်းဆွဲသည်။ “ကောင်လေး .. အင်္ကျီတွေကြေမယ်နော် .. တအား မလုပ်နဲ့ဦး” “အင်းပါ .. သိပါတယ် .. လည်ပင်းပေါက်ကနေပဲ နှိုက်မယ် .. ဆရာမနို့ကြီးတွေက ကိုင်ရတာ ကောင်းလို့” “ဟွန်း .. မင်း ကိုင်ဖို့ လည်ဟိုက်ဘလောက်စ် ၀တ်လာတာ ကျနေတာပါပဲ” “အာ .. ဆရာမကလဲ .. ကျနော် ကိုင်ဖို့မဟုတ်ရင် ဘယ်သူကိုင်ဖို့လဲ .. ဒါဆို ကျနော့်ဟာလည်း မကိုင်နဲ့” “ကောင်ဆိုးလေး .. ဒီလို ဂျီကျရလား .. ဟွန်း” မျက်စောင်းတစ်ချက်ကို နောက်ပြန်လှည့်၍ ထိုးလိုက်သည်တွင် အကွက်ချောင်းနေသည့် ရဲဝေယံ နှုတ်ခမ်းနီလေး ရဲနေသည့် နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖမ်း၍ငုံလိုက်သည်။
သင်းပျံ့ သည့် အနံ့နှင့်အတူ ချိုမြသည့် အနမ်းရဲ့ အရသာကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက် တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ပါးစပ်ခြင်းမခွာမိ။ “တော်တော့ကွာ .. သား လုပ်ချင်လဲ မြန်မြန်လုပ်တော့” သွေးကြွဖွယ် အနမ်းရဲ့ အရှိန်နှင့်အတူ လက်ထဲကိုင်မိထားသည့် တုတ်ခိုင်မာကြောသော လီးကြီးရဲ့ အတွေ့ကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားလာပြီဖြစ်သည့် ဒေါ်စိုးသူဇာကပင် ဖွင့်ဟကာ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ရဲဝေယံကလည်း အလိုက်တသိနှင့် ဆရာမဖြစ်သူရဲ့ ကိုယ်ကလေးကို ဖက်ထားရင်း စားပွဲဘက်သို့ တွန်း၍ နေရာရွှေ့ လိုက်ရာ၊ ဒေါ်စိုးသူဇာ စားပွဲစွန်းတွင် လက်ထောက်လျက်သားဖြစ်သည်။ ခြေတန်နှစ်ဖက်ကိုလည်း ခပ်ကားကား ခွဲပေးမိသည်။ ရဲဝေယံက ဒေါ်စိုးသူဇာရဲ့ စကပ်ကို မကာ ခါးပေါ်တင်သည်။ ဇာအနားသပ် ကွပ်ထားသော ပင်တီပါးပါးလေးက ကြီးမားသည့် တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကို လုံခြုံစွာ ဖုံးမထားနိုင်ရှာ။ အကြိမ်ကြိမ် မြင်ဖူးခဲ့ပေမယ့် ဒီမြင်ကွင်းက ရဲဝေယံ စ်ိတ်ထဲတွင် ရိုးမသွား။ သူ့စိတ်ကို အမြဲလှုပ်ရှားအောင် ဖမ်းစားနေမြဲမို့ ချက်ချင်းဆိုသလို ပင်တီစထဲ လက်ထိုးထည့်ကာ ဆွဲမရင်း ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီး တစ်ခြမ်းပေါ်သို့ လှမ်းတင်လိုက်သည်။ ပြူးထွက်လာသည့် အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီး လီးကို တံတွေးဆွတ်သည်။ ပြီးတာနှင့် အ၀ကိုတေ့၍ ထောက်ကာ ကော့သွင်းလိုက်သည်။ “အား … တအားပဲကွာ … အင်း … အင့် .. လုပ် … လုပ်” အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲ သူ့လီးကြီး အ၀င်အထွက်ဖြစ်နေသည်ကို အရသာခံကာကြည့်ရင်း ရဲဝေယံ ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်သည်။ တက်သုတ်ရိုက်ပြီး လုပ်ရသည်မို့ အချိန်ဆွဲနေဖို့ မကြိုးစား။ စတာလွှတ်ကတည်းက အရှိန်ကိုမြှင့်တင်ထားသည်မို့ ဒေါ်စိုးသူဇာရဲ့ တင်ပါးသားတွေက လှိုင်းလုံးများလိုတောင် လှုပ်ခါနေသည်။
“ငရဲ .. ငရဲ .. နင် ဘယ်မှာလဲ .. ဒီအပေါ်က မီးဖိုခန်းထဲမှာလား” အပြင်ဘက်စင်္ကြံဆီမှ စူးစူးရှရှ အော်သံကြောင့် ရဲဝေယံတို့နှစ်ယောက်စလုံး ပြူးပြူးပြဲပြဲ ဖြစ်သွားသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်အတူ ရှိနေသည်ကို လဲ့ယမင်းသိသွားရင် ပြသနာအကြီးကြီးတတ်နိုင်သည်။ ကုန်းပေးထားရာမှ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖယ်လိုက်သည်။ ဗြစ်ဆိုပြီး ကျွတ်ထွက်လာသည့်လီးကို ရဲဝေယံ ဘောင်းဘီထဲ အမြန်ထည့်သည်။ ဒေါ်စိုးသူဇာကတော့ ပုန်းဖို့နေရာရှာသည်။ အရေးထဲ ဒီမီးဖိုခန်းထဲတွင် ပစ္စည်းပစ္စယက များများစားစား မရှိသဖြင့် လူတစ်ယောက်ပုန်းနိုင်မည့် နေရာရယ်လို့ မရှိ။ အပြင်ဘက်မှ ခြေသံက တဖြေးဖြေးနှင့် နီးလာသည်။ ကြံရာမရသည့် အဆုံး ဒေါ်စိုးသူဇာ ရဲဝေယံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို လှီးဖြတ်နေသည့် စားပွဲကြီးအောက် ငုံ့ကာဝင်လိုက်သည်။ “ငါ ခေါ်နေတာ မကြားဘူးလား .. ငရဲ .. နင် နားပင်းနေလား” ဂေါ်ဖီထုပ်တစ်လုံးကို လှီးနေသည်ဟန် ပြုလုပ်လိုက်သော ရဲဝေယံက လဲ့ယမင်းအား ခပ်တည်တည်နှင့် လှမ်းကြည့်သည်။ သူ့ရင်ထဲတွင်တော့ လဲ့ယမင်း မီးဖိုခန်းထဲ ဆက်ဝင်မလာဖို့ ဆုတောင်းနေသည်။ ဆရာမဖြစ်တဲ့သူက သူ့ခါးအောက်တွင် စားပွဲနှင့်ကွယ်၍ ပုန်းနေမှန်း သိနေရာ ရင်ထဲတွင်လည်း စိုးရိမ်စိတ်နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်။ ရဲဝေယံ ဆုတောင်းမပြည့်ပါ။ လဲ့ယမင်းက မီးဖိုခန်းထဲ ၀င်လာပြီး စားပွဲ၍ တခြားဘက်တွင် ရပ်ကာ သူ့ကို စူးစမ်းသလို ကြည့်သည်။ “နင် ငါ့ကိုစကားမပြောချင်လဲ နေ .. ငါ မေးစရာတစ်ခု ရှိတယ် .. နင် ဆရာမကိုတွေ့သေးလား” “ခု .. န .. ကတော့ ဖြတ်သွားတာ တွေ့လိုက်တယ် .. ဘာလုပ် .. ” ဘာလုပ်မလို့လဲ ဟု မေးမည်အပြု သူ့ဘောင်းဘီိဂွကြားကို လာထိသည့် လက်အစုံကြောင့် စကားမဆက်နိုင်ဘဲဖြစ်သည်။
ထိုလက်က ငြိမ်ငြိမ်မနေဘဲ ဘောင်းဘီဇစ်ကို အသာဆွဲ၍ ဖွင့်လိုက်သည်တွင် လဲ့ယမင်းကို အလွတ်မပေးဘဲ ကြည့်နေမိသော သူ့မျက်လုံးတွေက အလိုလိုပြူးသွားသည်။ “ငရဲ .. နင် ငါ့ကို ဘာလို့ မျက်လုံးပြူးကြည့်နေတာလဲ .. ဆရာမအကြောင်းမေးတာ ဘာထူးဆန်းနေလို့လဲ .. ကဲပါ မထူးပါဘူး .. နင့်ကိုပဲ ပြောလိုက်မယ် .. မနက်ဖြန် ငါကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ အပြင်သွားစရာ ရှိတယ် .. အဲဒါ မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေးကို နင်ကြီးကြပ်ပြီး လုပ်လိုက်” ရဲဝေယံ အကြီးကြီး မကျေနပ်ဖြစ်သွားသည်။ ပုံမှန်ဆို ဒီအလုပ်က သူလုပ်နေစရာမလိုပါ။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးရဲ့ ကြီးကြပ်သူအဖြစ် တာဝန်ယူထားသူ လဲ့ယမင်းလုပ်ရမည့်ကိစ္စ။ အခုတော့ ဒီဟာမက သက်သက်လူလည်ကျပြီး သူ့ကိုခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ “ဒါမျိုး မလုပ်နဲ့ !!” စူစူပုပ်ပုပ်နှင့် သူ့အား မခိုင်းဖို့ဆင်ခြေပေးမည်အပြု ဘောင်းဘီထဲကနေ အပြင်ရောက်သွားသည့် လီးအား ဆရာမက ပါးစပ်နှင့် ဖမ်းငုံလိုက်ရာ ရဲဝေယံမျက်နှာက မချိမဆန့်အသွင် အလိုလိုပြောင်းသည်။ ရဲဝေယံမျက်နှာ ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်း ဒေါ်စိုးသူဇာက အောက်ကနေ မော်ကြည့်နေသဖြင့် မြင်နေရသည်။ သူမစိတ်ထဲ ရယ်ချင်ပက်ကျိ ဖြစ်နေသလို၊ ဒီကောင်လေးကို ထပ်၍လည်း ကလိကာစချင်နေသည်။ ပါးစပ်ထဲရောက်လာသည့် ထိပ်ဖူးကို ပါးကလေးများခွက်သည်အထိ အားနှင့်စုပ်လိုက်ပြီး လျှာနှင့်ထိပ်ဖူးဝကို ထိုးဆွသည်။ ရဲဝေယံ မျက်နှာ ရှုံ့ မဲ့တက်သွားသည်။ “ဟရောင် … ငရဲ .. မျက်နှာက ဘာဖြစ်နေတာလဲ .. ဘာလဲ နင်က မကျေနပ်ဘူးလား” “မ .. မကျေနပ်” (ဆရာမဖြစ်သူက လျှာနှင့်ထိုးဆွပေးနေယုံမက သူ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကို လှမ်းကိုင်အားပြုပြီး ပါးစပ်ထဲ လီးကို အသွင်းအထုတ်လုပ်နေရာ ရဲဝေယံ လဲ့ယမင်းအား ဘာစကားမှ ပီပီပြင်ပြင်ပြောလို့မရချေ) “ကောင်စုတ် .. နင့်ဖာသာနင် မကျေနပ်လဲ လဲသေလိုက် .. ငါ့လာပြီး အံကြိတ်ပြမနေနဲ့” (လဲ့ယမင်းကတော့ ရဲဝေယံ ဘာဖြစ်နေသည်ကို မသိဘဲ သူမကို စိန်ခေါ်သည်ဟုထင်က အပီပွဲကြမ်းနေသည်) “အာ … အင်း” “အင်းတွေ အဲတွေ လုပ်မနေနဲ့ … နင်မကျေနပ်ရင် ငါနဲ့ အခုရှင်းမယ် ..” (လက်သီးဆုတ်တစ်ဖက်ကို တခြားလက်ဖ၀ါးထံ ဖတ်ခနဲထိုးပြပြီး လဲ့ယမင်းက တုံ့ပြန်သည်) “ရ .. ရတယ် … တော်ပီ … မ .. မရှင်း .. တော့ .. ဘူး” “ဟွန်း … ကြောက်ရင်ကြောက်တယ် ၀န်ခံ … ဘာမှ စကားတွေ ထစ်ပြနေစရာမလိုဘူး .. သွားပြီ” တော်ပါသေး၏။ အတင်းအကြမ်းကို အာခေါင်ထဲရောက်မတတ် ငုံထားပြီး စုပ်ပေးနေသည့်အရှိန်ကြောင့် ရဲဝေယံ သုတ်တွေထိန်းမထားနိုင်ဘဲ ပန်းထွက်သည်။
သို့သော် လဲ့ယမင်းက သူ့ကိုကျောခိုင်းကာ ထွက်သွားပြီမို့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး ဖီးလ်တက်ပြီး ရှုံ့ မဲ့သွားသည်ကို မမြင်လိုက်ပါ။ မဟုတ်လျှင် သူ့ကို ကောင်းကောင်းထပ်ပြသနာ ရှာနေဦးမှာ သေချာလှသည်။ ရဲဝေယံ သူ့အား ပြုံးစစ မျက်နှာပေးနှင့် ကြည့်နေသော ဆရာမအား ငုံ့ကြည့်ကာ စိတ်ထဲက ကောင်းကောင်းကြီး ကြုံးဝါးနေလေသည်။ “တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဆရာမ .. တွေ့မယ် .. ဖင်လှန်ပြီးတော့ကို ထပ်လိုးပစ်ဦးမယ် .. ဟင်း ဟင်း” အတန်းပြီးလျှင် ထိုင်နေကြထုံးစံအတိုင်း အလင်္ကာစံအိမ်တွင် သူတို့အားလုံး ၀ိုင်းစုမိကြသည့်တိုင် ဦးရဲသူစိတ်က စားသောက်သည့်အထဲတွင် ရောက်မနေပါ။ အတန်းပြီးလျှင်ပြီးချင်း နေမကောင်းလို့ အိမ်စောစောပြန်မယ်နော်ဆိုပြီး အားလုံးကြားအောင် နှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်သွားသည့် ရွှေပိုးအိမ်ထံတွင် ရောက်နေသည်။ အလင်္ကာစံအိမ် ရောက်ရောက်ခြင်း ဖုန်းထဲဝင်လာသည့် မက်ဆေ့ခ်ျကြောင့်လည်း နေရထိုင်ရပိုခက်နေသည်။ မခက်ခံနိုင်ယိုးလား။ မက်ဆေ့ခ်ျထဲတွင် ရေးထားသည်က ဟိုနာမည်ကျော်မင်းသမီလေးရဲ့ ဒိုင်လေ။ ကိုကြီးနေရာတွင် ဆရာဆိုသည့် နာမ်စားသာလွဲသည်။ တောက်တောက်ယိုနေတယ်ကတော့ လုံးဝဆင်တူပင်။
“ဆရာ သောက်လေ .. ဘာတွေ တွေးပြီးငေးနေတာလဲ” “အော် … အင်း .. သောက်မယ် .. ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး” ဘေးနားတွင် ထိုင်နေသူ ကျော်ထူးရဲ့ အပြောကို ငေးတိကြောင်တောင် အမူအရာနှင့် တုံ့ပြန်လိုက်ပြီး စားပွဲပေါ်ရှိ ဘီယာပုလင်းကို ကောက်ကိုင်ကာမသည်။ ပုလင်းထက်ဝက်ကျိုးအောင်လောက် တရှိန်ထိုးမော့သောက်ပြီးလို့ စားပွဲပေါ်သို့ ပြန်အချတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် နေရာယူထားသူ မြလွန်းချိုက သူ့အား စူးစိုက်ကြည့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်သည်။ ဦးရဲသူ မလုံမလဲဖြစ်သွားပြီး မြလွန်းချိုအား တန်ပြန်ကြည့်မနေတော့ဘဲ စားပွဲပေါ်က အကြွပ်ကြော်ပန်းကန်ဆီ လက်လှမ်းသည်။ “ဆရာ .. ဆရာ့နောက်ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်ဝေသူဆီ ပေးလိုက်ပြီဆို .. ဟုတ်လား” “မြလွန်းချို .. နင်က စပြန်ပြီ ..” အားလုံးက သူ့အား အားနာသလို မြလွန်းချိုအား ၀ိုင်းဟန့်ကြပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ ဦးရဲသူ တပည့်တွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။ တကယ်လည်း သူ့ရဲ့ နောက်ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်ဝေသူဖြစ်သူ ဦးဇော်မောင်အား ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကျော်က ပေးအပ်ခဲ့သည်။ အဲဒီတုန်းက စာမူကြမ်းကို ဖတ်နေရင်း သူ့အား အံ့အားတကြီးနှင့် လှမ်းလှမ်းကြည့်နေသည့် ဦးဇော်မောင်ရဲ့ အသွင်ကို အခုထက်ထိ မြင်ယောင်နေသေးသည်။ နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို ဖတ်ပြီးသည့်အချိန်တွင် ဦးဇော်မောင်တစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်ဘဲ သူ့လက်ကိုဆွဲ၍ ကွန်ဂရက်ကျူးလေးရှင်းလုပ်သည်။
ဒါက ဆရာ့ရဲ့  .. အမျိုးသားစာပေဆုတော့ ကျိန်းသေပဲဆိုသည့် စကားကို သူ့နားထဲက မထွက်တော့ပေ။ “ဟုတ်တယ် ပေးလိုက်ပြီ … ဘာဇာတ်လမ်းလဲလို့တော့ မမေးနဲ့ .. စာအုပ်ထွက်မှသာ ဖတ်ကြည့်တော့” ၀ံ့ကြွားသည့် လေသံနှင့် ပြောလိုက်သည့် ဦးရဲသူအား မြလွန်းချိုက မျက်စောင်းလည်းထိုး၊ နှာခေါင်းလည်း ရှုံ့ ပြသည်။ သေချာသာကြည့်လျှင် ထိုပုံစံက တခြားသောယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အတွင် ရင်ထဲထိသွားနိုင်သည့် စတိုင်လ်ဖြစ်သော်လည်း အခုလောလောဆယ်တော့ ဦးရဲသူ ရင်ထဲ မတိုးပါ။ သူ့ရင်ထဲ အတွေးထဲတွင် ရှိနေသည်က သူ့အား စိတ်ကူး ပေးခဲ့သူ၊ သူ့စာမူအား ဖတ်ရှုပြီး ဝေဖန်ထောက်ပြပေးခဲ့သူ ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ အသွင်သာ ရှိသည်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် အလင်္ကာစံအိမ်နားက တည်းခိုခန်းတွင် စောင့်နေမယ်နော်ဆိုပြီး မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့ထားသူ ချစ်တပည့်မလေး ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ ပကတိ ကိုယ်လုံးလေး … တင်ခနဲ မြည်သံနှင့်အတူ ထပ်မံဝင်လာသည့် မက်ဆေ့ခ်ျသံကြောင့် ဦးရဲသူ ဖုန်းစကရင်က လော့ခ်ဘားကို ဘေးတိုက်ဆွဲရင်း ဖွင့်လိုက်သည်။ စကရင်ပေါ်တွင် မြင်လိုက်ရသည့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်လုံးကို ဆယ်ဖီရိုက်ထားသည့် ပုံကြောင့် ရင်တွေဒိန်းခနဲ ခုန်သည်။ မျက်နှာမပါပေမယ့် ဒါဘယ်သူ့ကိုယ်လုံးလဲဆိုတာ ဦးရဲသူ ကောင်းကောင်းသိသည်။ ထို့အပြင် တမင်တကာ ၀တ်လာတာဖြစ်ရမည့် အဖြူရောင်ဇာဝမ်းဆက် ၀တ်စုံက သူမကိုယ်ကို ပို၍စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းအောင် ဖန်တီးပေးနေသည်။ ဂလုခနဲ မြည်အောင်ပင် လည်ချောင်းထဲတက်လာသည့် တံတွေးကို မျိုချရသည်။
“ဆရာ .. ဒီနေ့အလုပ်များနေတာလား .. ဘီယာလည်း ဟုတ်တိပတ်တိ မသောက်ဘူး” “အော် .. အေး .. ဟုတ်တယ် .. အရေးကြီး အလုပ်ကိစ္စတစ်ခု ခေါင်းထဲရှိနေတာရော .. လူလည်းသိပ်နေမကောင်းတာနဲ့ ..” လင်းဟန်ရဲ့ အမေးကို ပြန်ဖြေလိုက်ရင်း ဦးရဲသူ ပြောလိုက်သည့်စကားကို အားပြုပြီး ၀ိုင်းကနေလစ်ဖို့ကြံသည်။ သူ့အလာကို ရွှေပိုးအိမ် ဘယ်လိုအနေအထားနှင့် မျှော်နေမယ်ဆိုတာ သိသည့်အတွက် တစ်စက္ကန့်တောင်မှ ဒီနေရာတွင် အချိန်ဖြုန်းမနေချင်တော့။ “ဆရာ အရင်ပြန်လိုက်ဦးမယ်ကွာ .. ဒီနေ့ကားလဲ ယူမလာတော့ တက်စီနဲ့ ပြန်ရမှာ .. မိုးချုပ်သွားရင် လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး” မြလွန်းချိုအပါအ၀င် တပည့်တွေက နေပါဦး၊ အပြန်သူတို့ လိုက်ပို့ပေးမယ် ဘာညာနှင့် တားနေပေမယ့် ဦးရဲသူ အတင်းပင် ဇွတ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အလင်္ကာစံအိမ်ခြံ အပေါက်ဝရောက်တော့ နောက်က တစ်ယောက်ယောက်များ လိုက်လာမလားလို့ ပြန်လှည့်ကြည့်သေးသည်။ တစ်ယောက်မှ အပြင်ထွက်လာသည်ကို မတွေ့သည်တွင် ကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းနှင့် လမ်းအတွင်းဘက်ရှိ တည်းခိုခန်းရှိရာသို့ ခပ်သုတ်သုတ်ပြေးလာခဲ့သည်။ တစ်ခုတော့ ဦးရဲသူ သတိထားဖို့ မေ့သွားသည်။ အလင်္ကာစံအိမ်ရဲ့ မျက်နှာစာဘက်ရှိ မှန်ချပ်ကြီးတွေသည် အပြင်ကိုထွင်းဖောက်မြင်အောင် ဖန်တီးထားသည်ကို။ အပြင်လမ်းမက ကြည့်ရင်သာ အထဲကို မမြင်ရသော်လည်း၊ အထဲကနေ အပြင်ဘက်ရှိ အခြေအနေကိုတော့ လှမ်းမြင်နိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ အပြင်ဘက်သို့ လှမ်းမြင်နိုင်သည့် မှန်ချပ်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်တွင် မျက်မှောင်ကျုံ့ ၍သူ့အား လှမ်းကြည့်နေသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိနေလိမ့်မည်ဟုလည်း ဦးရဲသူ လုံးလုံးကို ထင်မထားခဲ့ပါ။ တည်းခိုခန်းဆီသို့ ရောက်ခါနီးစဲစဲတွင် ရုတ်တရက် ထမြည်လာသည့် ဖုန်းသံကြောင့် ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ကြည့်မနေတော့ဘဲ ဦးရဲသူ ကောက်ဖြေလိုက်သည်။ “လာပြီ .. လာပြီဟ .. ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ” “အာ … ကိုရဲသူ .. ခင်ဗျားဘယ်ကို လာနေတာလဲ .. ကျနော့် စာအုပ်တိုက်ကိုလား” ဖုန်းဆက်လာသည့်သူက ရွှေပိုးအိမ်မဟုတ်ဘဲ လမ်းပြစာပေတိုက်က ဦးဇော်မောင်ဖြစ်နေသဖြင့် ဦးရဲသူ ခြေလှမ်းတွေ အလိုလိုရပ်သွားသည်။ ဦးဇော်မောင်သည် အလုပ်ကိစ္စကလွဲလို့ သူ့ကို အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး ဖုန်းဆက်တတ်သူမဟုတ်။ စိတ်ထဲထင့်ခနဲ ဖြစ်သည်။ “ကိုဇော်မောင် ဘာအကြောင်းရှိလို့လဲဗျ .. ပြောစရာရှိရင် ပြော” “ဒီလိုဗျ .. ကိုရဲသူ .. ခင်ဗျား ပိတောက်ရိပ်စာပေတိုက်က ကိုခိုင်မာကို သိတယ်မှတ်လား .. ကျနော်နဲ့ ညီအစ်ကိုလိုခင်တဲ့သူလေ” “ဟုတ် .. သိတယ် .. ကိုခိုင်မာက ဘာဖြစ်လို့လဲ” “ကိုခိုင်မာကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ..ဖြစ်တာက ကျနော်တို့ဗျ .. ဒီလိုဗျာ .. မနေ့က ကျနော် အားတာနဲ့ ကိုခိုင်မာဆီ ရောက်သွားတယ် .. အဲဒီမှာ ကိုခိုင်မာက အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ စာမူတစ်ခု သူရထားတယ် .. အမျိုးသမီးကလောင်ရှင် အသစ်တစ်ယောက်ရေးတာတဲ့ … ကျနော့်ကို ဖတ်ကြည့်မလားဆိုပြီး မေးတော့ ကျနော်လဲ ယူဖတ်ကြည့်လိုက်တယ် .. အဲဒီမှာ ….” “အဲဒီမှာ ဘာဖြစ်လဲ ကိုဇော်မောင် .. တခါထဲသာ အပြတ်ပြောဗျာ” (ရွှေပိုးအိမ်နှင့် တွေ့ဖို့ကိစ္စကို စိတ်ရောက်နေသဖြင့် ဦးဇော်မောင် စကားရပ်သွားတာကို အလျင်စလို ထောက်ကာမေးမိသည်) “ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ .. သူ့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးက ခင်ဗျားရဲ့ ဇာတ်လမ်းနဲ့ သွားတူနေတယ် .. အဓိက ဇာတ်ကောင်က ဓါတ်ခွဲခန်းပညာရှင်ဗျာ .. လျှို့ ဝှက်သည်းဖိုဆန်ဆန် ရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာ လူသတ်လုပ်ကြံဖို့ဆိုပြီး အဆိပ်သုံးတာလဲတူတယ် .. အိုဗျာ .. အကုန်လုံးလိုလို တူနေတယ် .. ကွဲတာဆိုလို့ အဓိကဇာတ်ကောင်က မိန်းကလေးဖြစ်နေတာ တစ်ခုပဲ .. ကျနော်လဲ ဖတ်ပြီး ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်း မသိဘူး .. အဲဒါ ခင်ဗျားများ တယောက်ယောက်ကို ခင်ဗျားဇာတ်လမ်း ပြလိုက်လား .. ဒါမှမဟုတ် ဒီဇာတ်လမ်းက တခြားဇာတ်လမ်း မဟုတ်ဘဲ ရှဲဒိုးများ သုံးထားတာလား .. ဆောရီးဗျာ ကိုရဲသူ .. ကျနော် မေးတာ လွန်သွားရင် …” ဦးဇော်မောင်က ဖုန်းထဲကနေ စကားတစ်ချို့ကို ထပ်၍ ပြောနေပါသေးသည်။
သို့သော် ဦးရဲသူ ထိုစကားတွေကို မကြားတော့ပါ။ ရွှေပိုးအိမ်က သူ့ကို ဘာမှမပြောပဲနှင့် သူ့ဇာတ်လမ်းနှင့်ဆင်တူ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို တခြားသောထုတ်ဝေသူတစ်ယောက်အား အပ်လိုက်ပြီဆိုသော အတွေးကသာ ကြီးစိုးထားသည်။ ရင်ထဲတွင် စိတ်တိုခြင်း၊ မခံချိမခံသာဖြစ်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ အလိုမကျခြင်း စသည့် ခံစားမှုပေါင်းစုံသည် အလုံးကြီးတစ်ခုသဖွယ် ပေါင်းစုံသည်။ ထိုအလုံးကြီးက လျော့ပါးသွားခြင်း မရှိဘဲ ကြီးသထက်ကြီးလာရာ ခြေလှမ်းတွေက ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် မြင်နေရပြီဖြစ်သော စွယ်တော်ရိပ်ဆိုသည့် တည်းခိုခန်းဆီသို့ အလျှင်အမြန်ပင် ဦးတည်သွားတော့သည်။ အခန်းတံခါးခေါက်သံကြားသည်နှင့် တခြားသူ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိနေသည့် ရွှေပိုးအိမ် သဘက်တွေဘာတွေတောင် ပတ်မနေတော့ဘဲ အတွင်းခံလေးနှင့်ပင် ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ သူမထင်ထားသည်က ဒီလိုမျိုးစတိုင်လ်ကို ဆရာသာမြင်သည်နှင့် အတင်းပွေ့ဖက်ပြီး အငမ်းမရနမ်းမည်ဆိုတာကို။ သို့သော် ကမူးထူးရှိုးနှင့် အခန်းထဲဝင်လာသည့် ဆရာက သူမအားဖက်ရမ်းနမ်းရှုံ့ သည်ဟူ၍ မရှိ။
လက်ကောက်ဝတ်တစ်ဖက်ကို ဆတ်ခနဲ ဖမ်းဆွဲပြီး မို့ရာကြီးနားခေါ်လာရာ ရွှေပိုးအိမ်မှာ ယက်ကန်ယက်ကန်နှင့် ပါလာရှာသည်။ “ဆရာ .. ဘာဖြစ်လာတာလဲ .. သမီး လက်ကိုဆွဲတာလဲ တအားပဲ” (ကုတင်စွန်းနားအရောက် တွန်းထုတ်လိုက်သဖြင့် ရွှေပိုးအိမ်ကိုယ်ကလေး ယိမ်းကာ မို့ရာပေါ်တွင် ထိုင်ကျသည်) “ဘာဖြစ်ရမှာလဲ .. မင်း .. မင်း ငါ့မပြောဘဲ စာအုပ်တိုက်တစ်ခုနဲ့ သွားပြီး စာအုပ်ထုတ်ဖို့ သဘောတူထားတယ် မဟုတ်လား” “ဟင် .. ဆရာ ဘယ်လိုသိတာလဲ” (ရွှေပိုးအိမ် အံ့အားသင့်သွားပြီး မျက်လုံလေးဝိုင်းကာ မေးမိသည်) “ဘယ်လိုသိရမလဲ .. အဲဒီစာအုပ်တိုက်ပိုင်ရှင်က မင်းစာမူကို ကောင်းလွန်းလို့ဆိုပြီး လူတကာကို လိုက်ပြနေတယ်” “အယ် .. ဟုတ်လား … ဒါဆို ၀မ်း .. သာ” “ဘာ !! .. ၀မ်းသာ ဟုတ်လား .. နေပါဦး .. မင်းက ဘာဖြစ်လို့ ငါပြောတဲ့အတိုင်း၊ ဝေဖန်ထားတဲ့အတိုင်း အကုန်လျှောက်ရေးရတာလဲ” “ဟင် .. ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာ .. ဆရာအကြံပေးတာ ကောင်းနေတာပဲ” (ရွှေပိုးအိမ် တကယ်ကို နားမလည်နိုင်သည့်အသွင်ဖြင့် မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နှင့် မေးသည်)“အေး .. ကောင်းတာ .. ကောင်းတာမှ သိပ်ကောင်း .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအကြံပေးထားတာကို ငါကလဲ ငါ့ဇာတ်လမ်းမှာ ပြန်သုံးထားတယ် .. သိပြီလား” “ဘယ်လို ဘယ်လို !! .. ဆရာ ဘာပြောတယ် .. ဆရာ့ကို ပြတဲ့ သမီးဇာတ်လမ်းထဲက အကြောင်းကို ဆရာက .. ဆရာ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ သုံးထားတယ်” “အေး .. ဟုတ်တယ် .. ငါ့ ဇာတ်ကောင်ကလည်း ဓါတ်ခွဲခန်းပညာရှင်ပဲ ..” သူမစာမူအား ထုတ်ဝေသူက ချီးကျူးနေတယ်ဆိုသည့် အပြောကြောင့် ၀မ်းသာပျော်မြူးနေသူ ရွှေပိုးအိမ်၊ သူမ အပျော်က မိနစ်ပိုင်းမျှပင် မခံလိုက်။ ဘာကြောင့် ဦးရဲသူ စိတ်တို၊စိတ်ရှုပ်နေဟန် ပေါက်နေမှန်းလည်း ဒက်ခနဲ သိလိုက်သည်။ သူမကိုယ်တိုင်လည်း သူမဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ပြီး အပြန်အလှန် ကိုးကားရေးထားသည်ဆိုသော ဆရာဖြစ်သူအား မကျေနပ်တော့။ အနှစ်နှစ်အလလက မျှော်လင့်ခဲ့သည့် အပင်လေးပွင့်ဖူးလာဖို့ လမ်းစ မြင်ယုံလေးရှိသေး .. တခြားတစ်ယောက်က ဒါသူ့အပင်လို့ လက်ညိုးလာထိုးနေချပြီ။
ရွှေပိုးအိမ် အသားတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်လာပြီး ဦးရဲသူအား ခပ်စိမ်းစိမ်းကြည့်သည်။ “ဒါက ဆရာမဟုတ်တာဘဲ .. သမီးကို အကြံပေးပြီးပြီဆိုမှတော့ သမီးဇာတ်လမ်းပေါ့ .. ဘာဖြစ်လို့ သမီးဆီက ခိုးချရတာလဲ” “ဘာ !! … ခိုးချတယ် .. မင်းကများ ပြောရသေးတယ် .. မင်းက ဘာဖြစ်လို့ ငါ့ဇာတ်လမ်းထဲက အကြောင်းအရာတွေ ယူရေးရသေးတာလဲ” “အို .. ဒါကတော့ ဆရာက ဘာဖြစ်လို့ ဆရာ့ဇာတ်လမ်းကို ပေးဖတ်သလဲ .. နောက်ပြီး ဆရာပဲ လက်ချာမှာတုန်းက ဟိုတုန်းက ဂရိတွေတောင် အောင်မြင်တဲ့သူတွေဆီက ကူးချသေးတာပဲဆို” “မင်း .. ကွာ … တောက် !!” ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ပြန်ပြောနေသည့် ရွှေပိုးအိမ်ကြောင့် ရင်ထဲထိန်းထားရသည့် ဒေါသက လက်ဖျားဆီသို့ ရောက်သည်။ ရုတ်တရက်မြောက်တက်သွားသည့် လက်ကြောင့် ရွှေပိုးအိမ် မျက်လုံးကလေး ၀ိုင်းစက်သွားသည်။ သို့သော် တဒင်္ဂအတွင်း ဦးရဲသူအား စိမ်းစိမ်းကြည့်ကာ သူမပါးတစ်ဖက်ကို ရှေ့တိုးပေးလိုက်သည်။ “ဆရာက ရိုက်မလို့လားးး … ရိုက်လေ … ဆရာ့လက်နဲ့ သမီးပါးထိလိုက်တာနဲ့ ဆရာနဲ့သမီး အပြတ်ပဲ” ဦးရဲသူ ငိုင်ကျသွားသည်။ သားဖြစ်သူနှင့် စကားများနေကြထုံးစံအတိုင်း လက်ကိုရွယ်လိုက်မိပေမယ့် ရွှေပိုးအိမ်အား ရိုက်ဖို့တော့ မရည်ရွယ်ပါ။ အခုတော့ ရွှေပိုးအိမ်က သူ့အားအထင်လွဲသွားချေပြီ။ မျက်ဝန်းများတွင် ရစ်ဝဲလာသည့် မျက်ရည်များအား အောက်သို့မကျအောင် ထိန်းထားရင်း ရွှေပိုးအိမ် ဦးရဲသူအနားမှ ခွာကာ အ၀တ်အစားတွေ ပြန်ဝတ်သည်။ ရွှေပိုးအိမ် လုပ်နေသမျှကို လိုက်ကြည့်နေပေမယ့် ဦးရဲသူ ဘာဆိုဘာမှ မပြောမိ။ ငူငူငိုင်ငိုင်နှင့် မို့ရာနားတွင် ဆက်ရပ်နေမိသည်။ အ၀တ်တွေပြန်ဝတ်ပြီးသည်နှင့် ရွှေပိုးအိမ်က သူ့အား တစ်ချက်ကြည့်သည်။
သူမရဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးသည် တစ်ခုခုကို ပြောချင်နေဟန်နှင့် တဆတ်ဆတ်နှင့် တုန်ရင်နေသည်။ သို့သော် ဘာစကားတစ်ခွန်းမှ မဆိုဘဲ မျက်နှာကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်အုပ်၍ အခန်းထဲမှ ပြေးထွက်သွားသည်။ ဦးရဲသူ ရင်ထဲတွင် ဟာခနဲဖြစ်ကာ အခန်းထဲတွင် ကျန်ခဲ့လေသည်။ အခန်းဝကနေ ရွှေပိုးအိမ် ပျောက်ကွယ်သွားမှ ဦးရဲသူ သတိဝင်လာသည်။ လနှင့်ချီပြီး ရင်းနှီးခဲ့ကြသည့် အချိန်အတောအတွင်း ရွှေပိုးအိမ်နှင့် သူသည် လွန်စွာမှ အတွဲညီလှသည်။ နှစ်ယောက်သား အမြဲတွေ့ကြလျှင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရေကုန်ရေခမ်း ချစ်ပွဲနွှဲကြသည်။ ရွှေပိုးအိမ် တကိုယ်လုံးတွင် မနမ်းဘူးသည့်နေရာရယ်လို့ မရှိသလို၊ သူ့တကိုယ်လုံးတွင် ရွှေပိုးအိမ် နှုတ်ခမ်းနှင့် မထိဘူးသော နေရာရယ်လို့လည်း မရှိပါ။ သူလိုသမျှ ရွှေပိုးအိမ်က ဖြည့်ဆည်းပေးသလို၊ ရွှေပိုးအိမ် ဆန္ဒပြည့်အောင်လည်း သူက အမြဲ စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ဆက်စ်ကိစ္စတွင် ထိုသို့ အတွဲညီသလို၊ စာရေးသည့် ကိစ္စတွင်လည်း နှစ်ယောက်သားက လက်တွဲညီလှသည်။ တကယ်ဆို ရွှေပိုးအိမ် ပြောတာ မမှားပါ။
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တစ်ယောက်စာကို တစ်ယောက်က ဖတ်ရှုအကြံပေးနေမှတော့ အိုင်ဒီယာချင်းတူနေတာ အဆန်းတကြယ် မဟုတ်။ ဒါက ဖြစ်မြဲဖြစ်လေ့ရှိသော ကိစ္စသာ။ သူမဇာတ်လမ်းနှင့် သူ့ဇာတ်လမ်း တူသွားတာနှင့်တင် ရွှေပိုးအိမ်နှင့် လမ်းခွဲရမည်တဲ့လား။ ရွှေပိုးအိမ်လို မိန်းကလေးမျိုး ဒီတစ်သက်တွင် နောက်ထပ်ရော တွေ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ဦးမှာလား .. ဦးရဲသူ ခြေလှမ်းတွေကို တံခါးဝဆီသို့ ဖြေညင်းစွာ လှမ်းမိသည်။ သုံးလေးလှမ်းလောက် လှမ်းပြီးသောအခါ ဖြေးဖြေးခြင်း ရွေ့ နေသည့် သူ့ခြေလှမ်းတွေက အရှိန်ရလာသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ တည်းခိုခန်းတလျှောက် ပြေးလွှားကာ အပြင်ဘက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ ရွှေပိုးအိမ်အား အင်းလျားလမ်းဘက်သို့ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချကာ တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ “ရွှေပိုးအိမ် !!!!” သူမနာမည်အား အကျယ်ကြီးအော်၍ ခေါ်လိုက်မှုကြောင့် ရွှေပိုးအိမ် ကိုယ်လုံးလေး ဆတ်ခနဲတုန်သွားသည်။ ခြေလှမ်းတွေက ရပ်သွားသည်။
နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ဖို့ သူမနှလုံးသားတစ်ခြမ်းက တိုက်တွန်းနေပေမယ့် ကျန်သည့်တစ်ခြမ်းက ခံပြင်းစိတ်ကြောင့် ခြေအစုံသာ ရပ်၍ နေလိုက်သည်။ သူမနောက်နားမှ တဖတ်ဖတ်နှင့် ခြေသံတွေ ကြားရသည်။ ထို့နောက် … “အို .. ဘာလုပ် !!” လက်ကောက်ဝတ်တစ်ဖက်ကို ဆတ်ခနဲ အဆွဲခံလိုက်ရသဖြင့် စိတ်တိုတိုနှင့် ငေါက်လိုက်မည်အပြု နှုတ်ခမ်းများအပေါ် အားနှင့်ကျလာသည့် အနမ်းကြောင့် ရွှေပိုးအိမ် ရင်တွေပွင့်ထွက်မတတ် ခံစားရသည်။ တင်းတင်းဖက်ထားသည့် ဆရာရဲ့ ကိုယ်လုံးကြီးကို လက်ကလေးနှစ်ဖက်နှင့် တွန်းပေမယ့် ဦးရဲသူကိုယ်က ကွာသွားခြင်း မရှိ။ ကိုယ်က မကွာသလို၊ နှုတ်ခမ်ချင်း ထိကပ်ထားမှုက မကွာလေရာ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ နှလုံးသားက ဦးနှောက်ကို ကျော်ကာ အလိုလို ရှေ့တန်းရောက်လာသည်။ ဦးရဲသူရဲ့  ပုခုံးများကို တွန်းနေသည့်လက်က ကျောပြင်ကြီးအား အလိုလို သိုင်းဖက်မိသည်။ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကလည်း တုံ့ပြန်အနမ်းတွေ ပေးဆပ်လာသည်။ ဦးရဲသူ လက်က ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ ကျောပြင်ကို တင်းတင်းဖက်ထားရင်း အောက်ဘက်သို့ အလိုလို လျှောဆင်းသွားသည်။
တင်ပါးလုံးလုံးလေးတွေပေါ် ရောက်သွားသောအခါ ခပ်တင်းတင်းကိုင်ကာ ဖျစ်ညှစ်မိသည်။ မရိုးနိုင်သည့် တင်းရင်းအိစီးသော အတွေ့က ဦးရဲသူရဲ့ လက်ချောင်းတွေကြားထဲ စိမ့်ဝင်၍လာသည်။ “ဆရာ !!! … ဆရာ မှတ်လား” ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ စူးစူးရှရှ အော်ဟစ်လိုက်သည့် မိန်းမသံကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကင်းကွာသွားသည့် သူတို့နှစ်ယောက် အနမ်းတွေရပ်တန့်ကုန်သည်။ အသံလာရာသို့ မျက်နှာမူထားသည့် ရွှေပိုးအိမ် မျက်နှာလေး ကွက်ခနဲ အရင်ပျက်သည်။ ခေါင်းကိုပုကာ ဦးရဲသူရဲ့ ကိုယ်နှင့် သူမအား ကွယ်လိုက်သည်။ သို့သော် အနားသို့ အပြေးအလွှား ရောက်ရှိလာသည့် မြလွန်းချိုတို့ လူသိုက်ကြောင့် ထွက်ပြေးဖို့တော့ အချိန်မရလိုက်ပါ။ “ဆရာ .. ရှင်းပြ ..” “ဘာမှ ရှင်းပြစရာ မလိုဘူး … ဆရာတို့က ဒီလို ကျိတ်ပုန်းခုတ်နေတာကိုး .. အံ့ရော .. အံ့ရော .. အရေးကြီးလုပ်စရာရှိတယ်ဆိုတာ ဒါလား .. လူသွားလမ်းကြီးမှာ ဒီလိုမျိုးတောင် ဖြစ်နေတယ်ပေါ့” စက်သေနတ်ပစ်သလို တဒက်ဒက်နှင့် အဆက်မပြတ်ထွက်ရှိလာသည့် မြလွန်းချိုပါးစပ်က စကားတွေကို ဦးရဲသူတို့ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမှန်းမသိ။ သူတို့နှစ်ယောက်အား အထင်သေး ရှုံ့ ချသည့် အကြည့်နှင့် ၀ိုင်းကြည့်နေကြသည့် တပည့်တွေရဲ့ မျက်နှာများကိုလည်း ရဲရဲရင်မဆိုင်ရဲ။ နှစ်ယောက်သား လက်ချင်းချိတ်တွဲကာ ခေါင်းငုံ့၍ ပြောသမျှ ခံနေရသည်။ မြလွန်းချိုက ဒီလောက်ပြောနေတာတောင် အားမရဟန်နှင့် အိတ်ထဲက ဖုန်းကိုထုတ်သည်။
“ဒီတစ်ပတ်ထွက်မယ့် ဂျာနယ်အတွက် သတင်းလိုနေတာ အခုတော့ အတော်ပဲ … နာမည်ကျော်စာရေးဆရာကြီးနဲ့ သူ့တပည့်မဆိုလို့ကတော့ ဂျာနယ်ရောင်းကောင်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း” “မြလွန်းချို … မင်း … မင်းးးး” ဦးရဲသူ ဒေါသတကြီးနှင့် မြလွန်းချိုအား ကြည့်မိသလို၊ ရွှေပိုးအိမ် မျက်နှာကလည်း သွေးဆုတ်ကာ ဖြူလျော်သွားသည်။ မြလွန်းချို ဒီလောက်အထိ လုပ်လိမ့်မည်ဟု မထင်ထား။ သူမမျက်နှာအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖြတ်ခနဲ ကာလိုက်မိသည်။ အခြေအနေမဟန်တော့သည်ကို ရိပ်မိသည့် ဦးရဲသူ၊ ရွှေပိုးအိမ် လက်အား ဖြတ်ခနဲဆွဲ၍ တပည့်တွေရှေ့မှောက်မှ အားကုန်ထွက်ပြေးသည်။ ဆရာရဲ့ အကြံကို နားလည်လိုက်သည့် ရွှေပိုးအိမ်ကလည်း တူယှဉ်တွဲကာ ပြေးသည်။ မြလွန်းချိုကမူ ဒီလိုပြေးလို့ရမလားဟု ကြုံးဝါးကာ နောက်ကနေ ပြေးလိုက်၍ လာလေသည်။
ဒီတလောအတွင်း သူ့ဟင်းတွေကို ကောင်းလာတယ်ဟု ချီးမွမ်းထားသည့် အဖေဖြစ်သူကြောင့်၊ ညနေစာအတွက် ဆရာမနှင့် နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး တီထွင်ထားသည့် ဟင်းတစ်မျိုးချက်ကျွေးဖို့ ရဲဝေယံ စဉ်းစားမိသည်။ ဒီနေ့ညနေ အလုပ်က စောစောပြန်လို့ရသည်နှင့် လမ်းကြုံတဲ့ စိုးသူဇာ စားသောက်ဆိုင်နှင့် မလှမ်းမကမ်းက စင်တာ ကို ၀င်လိုက်သည်။ လိုအပ်သည့် စားသောက်ကုန်တွေ ၀ယ်ပြီးလို့ အိမ်ပြန်တော့မည်ဆိုကာ ထွက်လာတော့ မုခ်ပေါက်နားတွင် ပြုလုပ်နေသော စာအုပ်အရောင်းပွဲတော်ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို တွေ့သည်။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ ငေးမိသွားချိန်တွင် ခုံတစ်ခုပေါ်တွင် အစီအရီနှင့်တင်ထားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို သွားတွေ့သည်။ ရဲဝေယံ အထုတ်တွေဆွဲလျှက်နှင့် ထိုစာအုပ်စင်နား ကမန်းကတမ်း ရောက်သွားသည်။ “ဒါ … ဒါ .. အခုမှ ထွက်တာလား” “ဟုတ်တယ် အကို .. ဒီအပတ်မှ ထွက်တာ .. ထွက်ထွက်ပြီးခြင်း တအားရောင်းရလို့ ကျမတို့ အရောင်းရဆုံး စာအုပ်စာရင်းမှာ ပြထားတာလေ .. အကို့မှာ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေရှိရင် လက်ဆောင်ပေးလို့ရတာပေါ့ .. ယူမလား” အရောင်းကောင်မလေးက ရဲဝေယံရဲ့  ခပ်ချောချောရုပ်ကို ငေးကြည့်ရင်း အပြည့်အစုံ ရှင်းပြနေသည်။ သို့သော် ရဲဝေယံ မိုးပြာရောင်ဝန်ထမ်းဝတ်စုံလေး ၀တ်ထားသော ကောင်မလေးကို ပြန်ငမ်းမိဖို့ စိတ်မ၀င်စားပါ။
စာအုပ်ထဲက ဟင်းချက်နည်းတွေကို တစ်ရွက်ချင်း လှန်ကြည့်ရင်း သူ့နားထဲတွင် ကောင်မလေး ပြောလိုက်သည့် အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေဆိုသည့် အသုံးကိုသာ ထပ်ပြန်တလဲလဲ ကြားနေမိသည်။ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေကို ပေးဖို့တဲ့လား။ ပေးစရာမလိုဘူး။ ဒီစာအုပ်ရေးတဲ့သူက ငါ့ရဲ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေပဲ။ နောက်ပြီး ဒီထဲက နည်းတွေက ငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ဖော်စပ်ထားတဲ့နည်းတွေပဲ။ “အကို မယူတော့ဘူးလား” စာအုပ်ကို ကုန်သည့်အထိ လှန်ကြည့်ပြီးလောက် မျက်စိပျက်မျက်နှာပျက် ဖြစ်နေသည့် ရဲဝေယံအား ကောင်မလေးက နားမလည်နိုင်စွာ မေးသည်။ ရဲဝေယံ ကောင်မလေးကို ဒေါသထွက်နေသည့် မျက်လုံးများနှင့် စိမ်းစိမ်းကြည့်သည်။ သူ့အကြည့်ကြောင့် ၀န်ထမ်းကောင်မလေး ထိတ်လန့်သွားပြီး နောက်သို့ ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်သည်။ ရဲဝေယံ ကောင်မလေးရဲ့ အပြုအမူကို သတိထားမိသွားပြီး လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ရင်း ချာခနဲ လှည့်ထွက်သည်။ “အကို .. ဒီမှာ အကို့ပစ္စည်းတွေ .. အကို .. အကို!!” စာအုပ်စင်ခြေရင်းတွင် ပစ်ချထားခြင်းခံရသော ကြွတ်ကြွတ်အိတ်ထုပ်များကို လက်ညိုးထိုးပြရင်း ၀န်ထမ်းကောင်မလေးက နောက်ကနေ အော်ခေါ်သည်။
သို့သော် အ၀င်ပေါက်တံခါးရှိ မှန်ချပ်များကို တွန်းဖွင့်ကာ ပြေးထွက်သွားသည့် ရဲဝေယံက လုံးဝကို လှည့်ကြည့်မနေပါ။ ဈေးဝယ်သူ မိသားစုတစ်စုကို စူပါမားကတ် လာပို့ပေးသော တက်စီတစ်စီးရဲ့ နောက်ခန်းတွင် ခပ်မြန်မြန်ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း လေသံပြတ်နှင့် ကားမောင်းသူကို လှမ်းပြောသည်။ “စိုးသူဇာ စားသောက်ဆိုင်ကို အမြန်ဆုံးပို့ပေးဗျာ” ရုံးခန်းထဲကနေ ဆိုင်ရဲ့ အမိုးထိပ်သို့ လက်ကိုဆွဲ၍ ခေါ်လာတာခံခဲ့ရစဉ်က ဒီကောင်လေး ဘာဖြစ်လာတာလဲလို့ တစ်ခွန်းမှ ဒေါ်စိုးသူဇာ မေးလို့မရ။ပြင်ဖို့ အတွက် ထားသည့် တံခါးပေါက်ကနေ ထွက်ပြီး ရေတိုင်ကီကြီးများရဲ့ အကွယ်တွင် ထိုင်မိတော့မှ ကောင်လေးဆီက ဒေါသတကြီးနှင့် သူမအား စွပ်စွဲသည့် စကားတွေကို ကြားရသည်။ ဒီတော့မှ ဒေါ်စိုးသူဇာ သဘောပေါက်ရသည်။ ကြောင်ပေါက်စလေး မာန်ဖီကာ တဂီးဂီးနှင့် အော်နေသလို စကားတွေကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောနေသည့် ရဲဝေယံအား သူမ ဘာမှ မတုံ့ပြန်သေး။ သူ့နေရာမှာ သူမဆိုလျှင်လည်း ဒီလိုမျိုး ဖြစ်မည်ဆိုတာ သိနေသည်မို့ ပြောချင်တာမှန်သမျှ ပြောပါစေဆိုပြီး လွှတ်ပေးထားလိုက်သည်။ သူ့အား ဘာမှ မတုံ့ပြန်ဘဲ စိတ်မကောင်းသည့် မျက်လုံးများနှင့်သာ ရီဝေစွာ စိုက်ကြည့်နေသည့် ဒေါ်စိုးသူဇာကြောင့် ရဲဝေယံ နောက်ထပ်ဘာစကားလုံးတွေ သုံးကာ ရန်ထောင်ရမှန်း မသိတော့။ သူ့အနေနှင့်က သူ့အား တစ်ခုခုတုံ့ပြန်မှ အပြန်အလှန်ငြင်းခုန်တတ်တာ ဖြစ်သည်။
ဘာမှ မပြောဘဲ ငြိမ်ခံနေသည့်သူကျတော့ ရဲဝေယံ ဆက်ပြောစရာ စကားမရှိ။ ရင်ထဲရှိရှိသမျှကို ပြောချလိုက်ရလို့လား မသိ။ အနည်းငယ်တော့ ကျေနပ်သလို ဖြစ်သည်။ ခြေထောက်လေးနှစ်ဖက်ကို ထောင်လျက်ကွေးကာ ငုတ်တုပ်ထိုင်နေသည့် ဒေါ်စိုးသူဇာနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ခြေပစ်လက်ပစ် ၀င်ထိုင်မိသည်။ “မင်းပြောလို့ ပြီးရင် .. ဆရာမပြောမယ် .. ခေါင်းအေးအေးထားပြီး သေချာနားထောင် .. ဟုတ်တယ် .. ဒီစာအုပ်ထဲမှာ မင်းပြောခဲ့တဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေ ပါတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲ .. အဲဒီအတွက် မင်းနာမည်ကို နည်းစနစ်ပြုစုသူနေရာမှာ အတူတွဲပြီး ဖော်ပြသင့်တာလဲ ဟုတ်တယ် .. ဒါပေမယ့် မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်း .. အဲဒီလိုသာ ဆရာမနဲ့အတူ မင်းနာမည်ကို တွဲပြီး ဖော်ပြလိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ .. လူတွေလူတွေ ပြောကြမယ့် အတင်းအဖျင်းတွေကို မင်း ခံနိုင်မလား” ငိုက်စိုက်ကျနေသည့် ရဲဝေယံရဲ့ ခေါင်းက ဖြေညင်းစွာ မော့တက်လာပြီး ဆရာမဖြစ်သူကို လှည့်ကြည့်သည်။ ဒေါ်စိုးသူဇာက ကြင်နာသည့် မျက်ဝန်းများဖြင့် ကြည့်နေပြီး တည်ငြိမ်စွာ ဆက်ရှင်းပြသည်။ “ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေတဲ့ ဒီစာအုပ်မှာ လောလောဆယ်တော့ ဆရာမနာမည်ပဲ ထည့်ထားတယ် .. ဒါပေမယ့် ဒီဟင်းချက်နည်းတွေဟာ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ ဆရာမရင်ထဲက အသိဆုံးပါ .. မင်းကို ဘယ်တော့မှ ပစ်မထားပါဘူး ..။
” “ဆရာမ !!” မိခင်ရယ်လို့ ဘ၀တလျှောက်လုံး သေချာမသိခဲ့သော ရဲဝေယံ .. ဆရာမရဲ့ စကားကြောင့် ရင်ထဲငြိမ်းချမ်းသွားသည် “နေဦး .. ဆရာမပြောတာ မပြီးသေးဘူး .. မင်းအနေနဲ့က ဒီထက်မက ပိုပြီးတော့ နားလည်တတ်ကျွမ်းအောင် ကြိုးစားရမယ် .. အမြဲလေ့လာနေရမယ် .. နောင်တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်နေလို့ မင်း လုပ်ငန်းသဘောနားလည်လာရင် ဒီစိုးသူဇာဆိုင်ကို မင်းဦးစီးရလိမ့်မယ်” “ဒါ .. ဒါဆို .. လဲ့ယမင်းက??” “ဘာ .. လဲ့ယမင်းလဲ .. မင်း အခုထက်ထိ ဒီကောင်မလေး အရည်အချင်းကို သဘောမပေါက်သေးဘူးလား .. သူက နောက်လိုက်အနေနဲ့ပဲ ကောင်းတာ .. ရှေ့ကိုချွန်ပြီးထွက်လာနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိလို့လား .. ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကို အလကားသပ်သပ် ငါအပြစ်မပြောချင်လို့သာ .. ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း ဘာမှမရှိတဲ့ဟာလေး” လေသံမြင့်မြင့်နှင့် တောက်လျှောက်ပြောသွားပြီးနောက် ဒေါ်စိုးသူဇာ မျက်ဝန်းတွေက ပြန်လည်၍ ရီဝေသွားသည်။ ရဲဝေယံနားသို့ ဖင်ရွှေ့ ကာ ကပ်ထိုင်လိုက်ရင်း သူ့ပုခုံးတစ်ဖက်တွင် ခေါင်းလေးတစ်ဖက်ကို အသာတင်သည်။ “ဆရာမကို အထင်မလွဲပါနဲ့ကွာ .. မင်းနဲ့အတူ ရှိနေတဲ့အချိန်တွေကို ဆရာမ တကယ်တန်ဖိုးထားပါတယ် .. မင်းကြောင့် ဆရာမဘ၀လေး စိုပြည်ပြီး အိုင်ဒီယာသစ်တွေ ထွက်လာရတာပါ သားရယ် ..” တိုးညင်းလှသည့် စကားသံဆိုပေမယ့် ရဲဝေယံရဲ့ နှလုံးသားထဲတွင်တော့ အကျယ်ကြီးကို ကြားလိုက်ရပါသည်။ ပုခုံးပေါ်တွင် ရှိနေသော ဆရာမရဲ့  မျက်နှာလေးကို မေးဖျားလေးကနေ တဆင့်မလိုက်သောအခါ ဒေါ်စိုးသူဇာနှင့် ရဲဝေယံမျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်သွားသည်။ ထို့နောက် ရဲဝေယံ နှုတ်ခမ်းများက နှုတ်ခမ်းနီစိုစိုလေး ဆိုးထားသော ဆရာမရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးများပေါ်သို ဇတ်ကနဲ ကျရောက်လာ၏။
ဒေါ်စိုးသူဇာတစ်ယောက် ရဲဝေယံရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ တင်းကျပ်စွာ ထပ်တိုးဝင်လိုက်ပြီး အရှိန်ပြင်းပြင်းနှင့် ပြန်လည်နမ်းစုပ်မိသည်။ သင်သာလိင်ကိစ္စတွင် အတော်အသင့် အတွေ့အကြုံရှိလျှင် ကြားဖူး၊ ကြုံဖူးမှာ သေချာပါသည်။ လင်မယားအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သမီးရည်းစားအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အကြီးအကျယ် ကတောက်ကဆနှင့် စကားများပြီးသည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်အဆင်ပြေသွားပါက ထိုကိစ္စက ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ လိင်ကိစသည် နှစ်ယောက်သားကြားရှိ အပြင်းထန်ဆုံးသောနည်းဖြင့် ဖြေထုတ်ခြင်း ဖြစ်သဖြင့် အရှိန်အဟုန်ကြီးလှသည်။ မိုးမမြင်လေမမြင်ဆန်လှသည်။ အခုလည်း ရဲဝေယံက ဒေါ်စိုးသူဇာရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို အလွတ်မပေးဘဲ နမ်းသလို၊ ဒေါ်စိုးသူဇာကလည်း ရဲဝေယံမျက်နှာအား လက်နှစ်ဖက်နှင့်ညှပ်ကိုင်ရင်း အတင်းအကြမ်း ပြန်နမ်းသည်။ နမ်းနေရာမှ ရဲဝေယံ လက်တွေက ဆရာမရဲ့ ဖင်သားအိအိထွားထွားကြီးတွေဆီ လျှောဆင်းသွားပြီး အားရပါးရ ညှစ်နယ်သည်။ စကပ်ပေါ်မှ ဆုပ်နယ်ရင်း အားမရသည့်အခါ နောက်ဘက်မှဇစ်ကို ဖြေချသည်။
စကပ်လေး ခါးစပ်မှ ချောင်၍ လွတ်သွားသည်တွင် ပေါ်လာသည့် ပင်တီသားပေါ်ကနေ နောက်ထပ်တစ်ခါ ထပ်နယ်ပြန်သည်။ “မောင် … ” “ဆရာမ !!” ဒေါ်စိုးသူဇာရဲ့ နှုတ်မှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မောင်ဆိုသည့် ခေါ်သံကြောင့် ရဲဝေယံ အံ့သြတကြီးနှင် တုံ့ပြန်မိသည်။ မျက်နှာလေး နီရောင်သန်းနေသည့် ဒေါ်စိုးသူဇာက သူ့အား ရှက်ကိုးရှက်ကန်း အမူအရာလေးနှင့် စိုက်ကြည့်နေသည်။ ပြီးသည်နှင့် ၀တ်ထားသည့် ဘလောက်စ်အား လက်တစ်ဖက်လျှိုကာ ဆွဲထုတ်ရင်း ခေါင်းပေါ်ကနေ လှန်၍ ချွတ်လိုက်သည်။ ရဲဝေယံ အမြဲတပ်မက်ခဲ့ရသော နို့အုံဖွေးဖွေးကြီးတွေက အဖြူရောင်အောက်ခံတွင် အနက်ရောင်ဇာပြောက်များနှင့် လှပစွာကွပ်ထားသည့် ဘရာလေးထဲမှာ ထင်းခနဲ ပေါ်ထွက်လာသည်။ ရဲဝေယံ ကမန်းကတမ်း သူ့တီရှပ်ကို ခေါင်းပေါ်ကနေ ဆွဲချွတ်တော့ ဒေါ်စိုးသူဇာကပါ ကူညီရှာသည်။ ပြီးသည်နှင့် ရဲဝေယံခေါင်းအား သူမရင်ခွင်ထဲသို့ ဆွဲသွင်းသည်။ ရဲဝေယံက ချက်ချင်းဆိုသလို နို့အုံဖွေးဖွေးကြီးတစ်ခုရဲ့ အပေါ်ပိုင်းကို ဆတ်ခနဲ ငုံ့နမ်းသည်။ ဒေါ်စိုးသူဇာ အင်းခနဲ ညည်းပြီး သူ့ရဲ့ ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို လက်တစ်ဖက်နှင့် ဖွကာဆုပ်သည်။ ကျန်သည့် လက်တစ်ဖက်က ဘရာချိတ်ကလေးကို နောက်ပြန်စမ်းကာ တွန်းဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
နို့အုံများကို တင်းကျပ်စွာ ထိန်းထားသည့် ဘရာက ချောင်သွားသည်ဆိုသည်နှင့် ရဲဝေယံ နို့သီးခေါင်း နီနီညိုညိုလေး တစ်ဖက်ကို အားရပါးရ ဆွဲစို့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသည့် မိန်းမကြီးမို့ ဒေါ်စိုးသူဇာရဲ့ နို့သီးတွေက သေးသေးလေးတွေ မဟုတ်။ သူ့လက်သန်း တစ်ဆစ်စာလောက် ရှိသည်။ စို့လို့ကတော့ ဘာကောင်းသလဲ မမေးနဲ့။ နို့သီလေးတွေ တင်းမာစူတက်လာသည်အထိ ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့ပစ်လိုက်သည်။ ဒေါ်စိုးသူဇာ တစ်ယောက် ရဲဝေယံရဲ့ ခေါင်းအား တင်းတင်းဖက်ထားရင်း တအင်းအင်းနှင့် ညည်းနေရသည်။ “မောင် .. မနေနိုင်တော့ဘူး .. မောင့်လီးကြီး အပြင်ထုတ်လိုက်တော့” “ဟုတ် … မောင်လည်း ဆရာမကို လုပ်ချင်နေပြီ” “မောင် .. အခုထက်ထိ ဆရာမလို့ ခေါ်နေသေးတယ် .. ဟုတ်လား” “အင်း .. ဆရာမလို့ ခေါ်ရတာ အာတွေ့တယ် .. ဆရာမ စိတ်မဆိုးဘူး မှတ်လား” “မဆိုးပါဘူး .. မောင် ဘာလုပ်လုပ် စိတ်ဆိုးစရာလား” “တကယ် .. ဒါဆို” ရဲဝေယံက ပြောရင်းနှင့် ဒေါ်စိုးသူဇာရဲ့ ပေါင်တံတစ်ဖက်ကို ကြွခိုင်းပြီး စကပ်အောက် လက်ထိုးထည့်ရင်း ပင်တီလေးကို လှမ်းချွတ်သည်။ ခြေဖမိုး ဖောင်းဖောင်းလေးတစ်ဖက်မှ လွတ်သွားသည်နောက် နောက်တစ်ဖက် ကျွတ်တာတောင် စောင့်မနေနိုင်တော့ဘဲ ဆရာမအား သူ့ပေါင်ပေါ် ပွေ့တင်သည်။ ဒေါ်စိုးသူဇာ ကိုယ်တိုင်လည်း ရမ္မက်လှိုင်းတွေ ပြင်းထန်နေပြီဖြစ်ရာ သူမလက်နှင့် ဘောင်းဘီထဲမှ ဆွဲထုတ်ထားသည့် လီးမာမာကြီးအား လက်သွယ်သွယ်လေးနှင့် လှမ်းကိုင်သည်။ အရည်တွေရွှဲစပြုနေသော အဖုတ်ဝနှင့်တေ့ကာ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို အပေါ်ကနေ အားနှင့်ဖိချလိုက်သည်။
“ရှီး … အာ့ … အာ့” “အား .. ကောင်းတာ ဆရာမရယ်” တစ်ချက်ထဲနှင့် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တိုးဝင်သွားသည့် လီးကြီးကြောင့် နှစ်ယောက်စလုံး အော်ကာညည်းမိကြသည်။ တော်တော့တော်သေးသည်။ ဒီအမိုးပေါ်သို့ တက်ရောက်နိုင်သည့် လူက ၀န်ထမ်းတွေလောက်ပဲ ရှိပေရာ၊ သူတို့တွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီ အလုပ်များနေသည့် အခုလိုအချိန်မျိုးတွင် ရဲဝေယံတို့နှစ်ယောက် စိတ်ကြိုက်ကဲလို့ ရနေသည်။ တကယ်တော့ သူတို့နှစ်ယောက် ရှည်ရှည်ဝေးဝေးလည်း ထိုအချက်ကို မစဉ်းစားနေမိပါ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တပ်မက်မှု ရမ္မက်အရှိန်နှင့် ရင်ချင်းအပ်ကာ ပွေ့ဖက်ထားရင်း ကာမစိတ်မွှန်နေကြရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကင်းကွာနေသည်ဟု ပြောလည်း ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် … လဲ့ယမင်းသည် အလုပ်ပင်ပန်းမှုရော၊ အခုတလော ခံစားနေရသည့် စိတ်ပင်ပန်းမှုကြောင့်ရော မွန်းကျပ်လာသလို ခံစားရသဖြင့် စီးကရက်ခိုးသောက်ရန်ဆိုပြီး အမိုးပေါ်သို့ တိတ်တဆိတ် တက်လာခဲ့သည်။ လဲ့ယမင်း စိတ်ထဲ ဆရာမက သူမအား ဆက်ဆံသည်မှာ တအားတင်းကျပ်လွန်းသည်ဟု ခံစားရသည်။ ဆူပူတယ်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပေမယ့် မျက်နှာသာပေးခြင်းလည်း မရှိလှ။ အခုတလော ဆရာမနှင့် ပလဲနလံသင့်နေသူက ရဲဝေယံရယ်။ တစ်ခုခုဆို ဆရာမက ရဲဝေယံကိုပဲ ခိုင်းတော့သည်။ ဟိုကောင်ကလည်း သူမ ခိုင်းလျှင်သာ မလုပ်ချင်တာ။ သူ့ဆရာမများ ပြောလိုက်ရင်တော့ ပါးစပ်က စကားမထွက်သေး ရက်စ်ဆိုသည့် အကောင် …။ ဘယ်သူမှ မသိအောင် တိတ်တဆိတ် တက်လာရသည်မို့ အမိုးပေါ်သို့ ထွက်သည့် ပေါက်ရောက်တော့ တံခါးရွက်ကိုတောင် အတင်းတွန်းမဖွင့်ရဲ။
တဖြေးဖြေးချင်းသာ တွန်းဖွင့်ရသည်။ လူတကိုယ်စာ ထွက်လောက်အာင် ဟသွားသည်နှင့် ကိုယ်ကို လှစ်ခနဲ တိုးထွက်လိုက်သည်။ အပြင်ဘက်သို့ ရောက်သွားသည့် လဲ့ယမင်း နားထဲတွင် ပီပီသသ ၀င်လာသည့် စကားသံများကို ကြားလိုက်ရသောအခါ တကိုယ်လုံး အေးခဲသွားသလို ခံစားရသည်။ နားထဲဝင်လာသည့် စကားသံတွေကို ပထမတော့ လဲ့ယမင်း မယုံနိုင်သေး။ သူမများ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်နေတာလားဟု တွေးလိုက်သည်။ အသံတွေလာရာ ရေတိုင်ကီများဘက်သို့ မြင်ရအောင် ကိုယ်ကို မသိမသာရွှေ့လိုက်သည်။ ရေတိုင်ကီ နှစ်လုံးကြားရှိ လွတ်နေသော နေရာလေးမှတဆင့် တစ်ဖက်ခြမ်းကို လှမ်းမြင်ရသောအခါ သူမ နားကြားလွဲတာ မဟုတ်ဆိုတာ သေချာသွားသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ ချောင်းကြည့်နေသည့် သူမအား သတိမပြုမိဘဲ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြသည့် စုံတွဲကြောင့် လဲ့ယမင်း ဒေါသတွေ ရင်ထဲက အလိပ်လိုက် တက်လာရှာသည်။ “တောက် .. တွေ့ကြသေးတာပေါ့ .. ငါကတော့ ကိုယ့်များ ပစားပေးလာမလားဆိုပြီး ဆရာမ ဆရာမနဲ့ တဖွဖွ ဖြစ်နေလိုက်ရတာ .. အခုတော့ ရှင်ကြီး ရင်ထဲမှာ ကျမက ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ မလောက်လေးမလောက်စားလား .. လဲ့ယမင်းတဲ့ .. တမင်းထဲ ရှိတယ် .. သိကြသေးတာပေါ့” အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ကာ စိတ်ထဲကနေ ကြုံးဝါးရင်း ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲဟု လဲ့ယမင်းတွေးသည်။ မျက်စိက ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်ကြည့်ရင်းနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းက အင်္ဂတေနံရံတွင် ဆင်ထားသည့် အရာတစ်ခုကို သွားတွေ့သည်။ လဲ့ယမင်း မျက်နှာလေး ၀င်းခနဲ ဖြစ်သည်။
ချက်ချင်းကိုယ်ကို အသာလေး တံခါးပေါက်ရှိရာသို့ ပြန်ရွှေ့ လာပြီး အိတ်ထဲက ဖုန်းကိုထုတ်သည်။ “ကိုအေးထွန်းလား” “မခေါ်စဖူး ဖုန်းခေါ်နေပါလား ယမင်းရ .. ပြောလေ .. ကိုအေးထွန်း ဘာလုပ်ပေးရမလဲ .. အလကားတော့ မရဘူး လက်ဖက်ရည်ကို လူကိုယ်တိုင် လိုက်တိုက်ရမယ်” စားသောက်ဆိုင်ရဲ့  အပြင်အင်ဂျင်နီယာ အဖြစ်ခန့်ထားသူ ကိုအေးထွန်းက အရေးထဲ သူမကို လာကြူနေသေးသည်။ လေသံတိုးနိုင်သမျှ တိုးအောင်ထားရင်း စပီကာနေရာနှင့် ပါးစပ်ကပ်ကာ သူမဖြစ်ချင်သည်ကို အရေးတကြီးပြောရသည်။ “ကျမပြောတာ လုပ်ပေးရင် လက်ဖက်ရည်မကဘူး .. ဘီယာပါ တိုက်မယ်” “နင် .. တကယ်ပြောတာလား .. ယမင်း” “တကယ်ပြောတာ .. ကိုအေးထွန်း .. ကျမတို့ အဆောက်အဦး မှာ ဆင်ထားတဲ့ ပီအေ စစ်စတန် က အမိုးမှာပါ ရှိတယ်မှတ်လား” “ရှိတယ်လေ .. ပြင်ရင် အသုံးပြုချင်ပြုလို့ရအောင် ဆိုပြီး အရှေ့ ဘက်မျက်နှာစာက နံရံမှာ တပ်ထားတာလေ ဘာဖြစ်လို့လဲ” “ဘာဖြစ်လဲ မေးမနေနဲ့ .. ကျမပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ် .. ရှင့်ကို ပြုစုဖို့ ကျမတာဝန်ထား” “သဘောပေါက်ပြီ.. ယမင်း .. ဘာလုပ်ပေးရမလဲသာပြော” “အဲဒီ အမိုးပေါ်က စပီကာကို ဖွင့်ပြီး ကြားတဲ့အသံကို အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးရောက်အောင် အခုလွှင့်ပေး” “အိုကေ .. ခနစောင့် .. ရမယ်” အကောင်းကြီးကောင်းကာ အချီကြီး ပြီးခဲ့ကြပြီးနောက် ဒေါ်စိုးသူဇာနှင့် ရဲဝေယံ လူမသိသူမသိနှင့် အမိုးပေါ်ကနေ တိတ်တဆိတ် ပြန်ဆင်းလာကြသည်။ ပုံမှန် ဒီလိုအချိန်တွင် ဒေါ်စိုးသူဇာက စားသောက်ဆိုင်ထဲတွင် လှည့်ပတ်ကြည့်ရှူပြီး လာရောက်စားသောက်သည့် ကာစတန်မာများကို ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်နှုတ်ဆက်နေကြဖြစ်သည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ဒုတိယထပ်တွင် ရှိသော စားသောက်ခန်းမထဲသို့ လျှောက်ဝင်လာခဲ့သည်။ ရဲဝေယံကလည်း လိုက်ပါနေကြ ထုံးစံအတိုင်း မလှမ်းမကမ်းမှ လိုက်လာခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ယောက် စားသောက်ခန်းမထဲ ၀င်လိုက်သည်နှင့် အားလုံးရဲ့ စူးစမ်းသော အကြည့်များက မြားအစင်းပေါင်းများစွာလို ကျရောက်လာသည်။ စားပွဲဝိုင်းထိုင်နေကြသူ အချင်းချင်းလည်း တီးတိုးတီးတိုးနှင့် ဒေါ်စိုးသူဇာတို့အား ကြည့်ရင်း စကားတွေ ပြောနေကြသည်။ အချို့ သော သူများရဲ့ အကြည့်က အထင်သေးသည့်ဟန်၊ အချို့ သောသူများရဲ့ အကြည့်က ပြစ်တင်ရှုံ့ ချဟန် ပေါက်နေသည်။ တစ်ခုခုတော့ လွဲနေပြီမှန်း ဒေါ်စိုးသူဇာ ချက်ချင်း သဘောပေါက်လိုက်သည်။ ဒေါ်စိုးသူဇာ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘဲ စားသောက်နေသည့် မိသားစုတစ်စုရဲ့ စားပွဲဝိုင်းနားတွင် ရပ်နေစဉ် တပည့်မဖြစ်သူ လဲ့ယမင်း ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ လျှောက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဒီအထပ်ရဲ့ ကြီးကြပ်သူအဖြစ် သူမကို တာဝန်ပေးထားသဖြင့် ဘာဖြစ်တာလဲဟု မေးမည်ပြုသည်။ သို့သော် လဲ့ယမင်းက သူမကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဘေးနားရှိ စားပွဲဝိုင်းက မိသားစုကို လှမ်းကာ ပြုံးပြသည်။
“ပြန်ကြတော့မလို့လား .. အန်တီတို့” “အေး ပြန်မယ်အေ .. စားရတာတောင် မသတီတော့ဘူး .. ဘယ့်နှယ့်တော် .. ကိုယ့်အဆင့်တန်းနဲ့မှ မလိုက် .. အရှက်မရှိတဲ့မိန်းမ ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်မှာ စားချင်စိတ်ကို မရှိဘူး .. ပြော .. ဘယ်လောက်ကျလဲ” “ရှင် .. ဘာပြောလိုက်တယ် !!” သူမကို ရွဲ့စောင်း၍ ကြည့်ကာ ပြောနေမှန်း သိသဖြင့် နားမလည်နိုင်သည့်အဆုံး ဒေါ်စိုးသူဇာ လေသံမာမာနှင့် စားပွဲဝိုင်းတွင် ထိုင်နေသည့် ဘွားတော်ကို လှမ်းမေးလိုက်သည်။ ဘွားတော်က ဒေါ်စိုးသူဇာကို စက်ဆုပ်ရွံရှာဟန်နှင့် တစ်ချက်ကြည့်ပြီး မျက်နှာလွှဲသွားသည်။ သူမထပ်မေးမည်ပြုတော့ လဲ့ယမင်းက သူမနှင့်ဘွားတော်ကြားတွင် ၀င်ရပ်လိုက်သည်။ “ဆရာမရယ် .. အပြောမခံနိုင်ရင်လည်း ကိုယ်က မဟုတ်တာမလုပ်နဲ့ပေါ့ .. အခုတော့ ဖြစ်စရာနေရာရှားလို့ အမိုးပေါ်မှာတောင် တက်ဖြစ်ရသေးလား .. အဲဒီအမိုးမှာ ဆင်ထားတဲ့ ပီအေစစ်စတမ်က ကောင်းသေးတယ်ဆိုတာ မေ့သွားတယ် မဟုတ်လား” “လဲ့ယမင်း … နင် … နင်” ဘာကြောင့် လူတွေအားလုံးက သူမတို့နှစ်ဦးကို မျက်လုံးစိမ်းများနှင့် ၀ိုင်းကြည့်နေကြသည်ဆိုတာကို ဒေါ်စိုးသူဇာ သဘောပေါက်သွားသည်။ ရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်းနှင့်အတူ ဆူဝေတက်လာသည့် ဒေါသကြောင့် သူမရဲ့ ညာလက်က မြောက်တက်သည်။
သို့သော် ထိုလက်က ဦးတည်ရာသို့ မရောက်လိုက်ပါ။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်လာမယ်မှန်း သိနေဟန်တူသည့် လဲ့ယမင်းက သူမလက်ကို ဆီးဖမ်းထားသည်။ “အနာပေါ်တုတ်ကျတယ်ပေါ့ .. ဟုတ်လား .. ကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့ ကလေးကို မုန့်ပေးကြိုက်ရတယ်လို့ .. အော် .. မှားသွားလို့ .. မုန့်ပေးကြိုက်တာ ရှင်မဟုတ်ဘူး .. ဟို နွား !!” လက်ညိုးထိုးကာ လှမ်းအော်လိုက်မှုကြောင့် တစ်ဆိုင်လုံးရှိ လူတွေရဲ့ အကြည့်က ရဲဝေယံဆီသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ သို့သော် ရဲဝေယံရဲ့ အကြည့်ထဲတွင်မူ သူတို့တွေ ရှိမနေပါ။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဆယ်နှစ်စာလောက် အိုစာသွားသည့် ဆရာမရဲ့ မျက်နှာလေးသာ ရှိနေသည်။ ဒေါ်စိုးသူဇာရဲ့ မျက်ဝန်းများတွင် အလိုလိုနေရင်း မျက်ရည်စတွေ ခိုတွဲလာသည်။ ထို့နောက် မျက်နှာကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်အုပ်ကာ စားသောက်ခန်းမထဲမှ တဟုန်ထိုး ထွက်ပြေးသွားလေတော့သည်။ အခုတော့ အရာရာသည် ပြီးဆုံးခဲ့တာ တစ်လကျော်ကျော် ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အခုအချိန်ထိ ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ ရင်ထဲတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ ကိစ္စရပ်အားလုံး အနည်မထိုင်သေးပါ။ ဘယ်အချိန်ကျမှ သူမ အတွေးထဲကနေ ဆရာ့ကို မောင်းထုတ်လို့ရမည်ဆိုတာ တကယ်ကို အဖြေရှာရခက်သော ပုစ္ဆာတစ်ခုဖြစ်နေသည်။ အကယ်၍ ဦးနှောက်ထဲကနေ ဆရာ့ကို မောင်းထုတ်ပစ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်တောင်မှ နှလုံးသားထဲကနေ ဆရာဦးရဲသူရဲ့ ပုံရိပ် ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်အောင် စွမ်းနိုင်ပါဦးမည်လော။
ရွှေပိုးအိမ် ထိုမေးခွန်း၏ အဖြေကို မရှာနိုင်သလို၊ သိလိုစိတ်လည်း မရှိပါချေ။ ဆရာနှင့် ပတ်သက်တာ မှန်သမျှကို မေ့ပျောက်ဖို့ဆိုသော အတွေးနှင့် သူမရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ဇာတ်လမ်းကို မထုတ်တော့ဖို့ ရွှေပိုးအိမ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မြလွန်းချိုတို့ အဖွဲ့ သူမနှင့် ဆရာ့အား ပက်ပင်းမိပြီး နောက်တစ်ရက်မှာတင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို ဆရာ့ကို အသိမပေးခဲ့သလို၊ သူငယ်ချင်းမဖြစ်သူ သိင်္ဂီကိုလည်း မပြောပြခဲ့ပါ။ သိင်္ဂီက သူမကို ဖုန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် မအားဘူးလို့ အကြောင်းပြပြီးသာ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားခဲ့သည်။ ကြာတော့ သူ့အလုပ်နှင့်သူ မအားသည့် သိင်္ဂီကလည်း မဆက်သွယ်တော့ပါ။ ဦးရဲသူနှင့် ပတ်သက်သော သူမရဲ့ ဘ၀သည် ကန့်လန့်ကာချသလို ပြီးဆုံးခဲ့ချေပြီ။ သူမဘ၀နှင့် သူမပြန်ဖြစ်သွားပြီဟု ဆိုလို့ရပေမယ့် ရွှေပိုးအိမ်အတွက် အရာရာသည် အခုတော့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့လွန်းလှ၏။ တစ်ဦးတည်သော သမီးအဖြစ် ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည့်အပြင်၊ မာမီက ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်အောင် ပြုစုထိန်းကျောင်းခဲ့သည်မို့ ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ ဘ၀တွင် အဖော်ဆိုတာ တမ်းတရမှန်း မသိခဲ့ပါ။ လူမှန်းသူမှန်း သိတတ်စအရွယ်ကပင် သူမဖာသာသူမ ဘ၀ကို ရှင်သန်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည်။ သို့သော် ဆရာဦးရဲသူနှင့် ဆုံတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရွှေပိုးအိမ် အဖော်ဆိုသည့် စကားကို ကောင်းကောင်းနားလည်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ဆရာနှင့်သူမ အဆင့်တွေကျော်ပြီး အဆုံးစွန်သော အခြေအနေသို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရောက်သွားခဲ့သည်မှာ မှန်ပါသည်။ ၀တ္ထုဇာတ်လမ်းဆက်ရေးလို့ မရခြင်းအတွက် ထွက်ပေါက်ရှာရင်း နီးစပ်သွားတာဟုဆိုလည်း ရွှေပိုးအိမ် မငြင်းချင်ပါ။
သို့သော် သူမနှလုံးသားက တစ်သက်မှာတစ်ခါမှ မကြုံခဲ့ဖူးသော စကေးလ် နှင့် လှုပ်ရှားခဲ့သည်ဆိုတာကိုလည်း ထည့်ပြောရပေလိမ့်မည်။ ဆရာ့ရဲ့ အနမ်း၊ အတွေ့အထိ၊ အပြုအစု၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် အလိုးအဆောင့်များကို သူမ တရံမပြတ် မမေ့နိုင်ခဲ့ပါ။ စာရေးဖို့ အစီအစဉ် လောလောဆယ်တွင် ရှိမနေပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဘယ်လိုမှ ရွှေပိုးအိမ် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မပျော်ခဲ့ပါချေ။ ဒီနေ့လည်း မနေ့ညကလို အိပ်မပျော်သည့်ရက် တစ်ရက် ထပ်တိုးလာမှာ စိုးသည့်အတွင်း အောက်ထပ် မီးဖိုချောင်က ထမင်းစားပွဲကြီးတွင် တစ်ယောက်ထဲထိုင်ရင်း ရွှေပိုးအိမ် မာမီ သိမ်းထားသည့် ဗောကာ နှင့် နှစ်ပါးသွားနေသည်။ ရွှေပိုးအိမ် ကိုယ့်အပူနှင့်ကိုယ်မို့ မာမီနှင့်တောင် စကားမပြောဖြစ်။ အခုတလော မာမီလည်း ဘာဖြစ်သည်မသိ။ မျက်နှာမသာမယာဖြစ်ပြီး အလုပ်တွေများနေသည်ကို သတိထားမိသည်။ ရွှေပိုးအိမ်နှင့်လည်း တစ်အိမ်ထဲသာ နေသည်။ စကားကတစ်ခွန်း နှစ်ခွန်းထပ် ပိုမပြောဖြစ်။ လက်ထဲကိုင်ထားသည့် ဖန်ခွက်လေးကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်းမသိ မြှောက်ကိုင်ရင်း ပါးစပ်နှင့်တေ့မည်ပြုစဉ်မှာပင် အပြင်ဘက်မှ တံခါးဖွင့်သံကြားသည်။ မာမီ ပြန်လာတာဖြစ်မည်။ ရွှေပိုးအိမ် စကားပြောချင်စိတ် ကုန်ခမ်းနေသည်မို့ အသံလှမ်း၍ မပြုမိ။ သို့သော် ဒေါ်စိုးသူဇာက အပေါ်ထပ်ကို တန်း၍ တက်သွားသည် မဟုတ်ဘဲ မီးဖိုဆောင်ထဲ ၀င်လာသည်ကို တွေ့လိုက်သည်။
“မာမီ ..” “သမီး ..” တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ခပ်အမ်းအမ်း အမူအရာနှင့် နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးနောက် ဒေါ်စိုးသူဇာက ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ ဘေးက ခုံတွင် ၀င်ထိုင်သည်။ သူမရဲ့ လက်ကလည်း စားပွဲပေါ်တွင် ကျန်နေသေးသည် ဖန်ခွက်အလွတ်တစ်လုံးကို ဆွဲယူလိုက်သည်။ ရင်ထဲက တင်းကျပ်နေမှုကို ဗော့ကာနှင့် မျောချပြီးနောက် ဒေါ်စိုးသူဇာ သမီးဖြစ်သူအား ကြည့်သည်။ သမီးဖြစ်သူကလည်း သူမအား မေးခွန်းထုတ်သလို ပြန်ကြည့်နေသည်။ “မာမီ ဘာဖြစ်နေတာလဲ” “သမီး တကယ် မသိတာလား .. မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာလား” “တကယ်မသိတာ မာမီရ .. သမီးလဲ အခုတလော လူနဲ့စိတ်နဲ့ မကပ်ဘူး ဖြစ်နေတာ” “ဘာဖြစ်နေတာလဲ သမီး” (ဒေါ်စိုးသူဇာ ငေးငေးငိုင်ငိုင်နှင့် ပြောနေသော သမီးဖြစ်သူအား ကြည့်ရင်း အံ့သြစိတ်နှင့် မေးမိ၏) “မာမီကရော ဘာဖြစ်နေတာလဲ” ထို့နောက်တွင်တော့ … ဒေါ်စိုးသူဇာရဲ့ စကားရှည်ကြီး ဆုံးသွားသည်နှင့် ရွှေပိုးအိမ်သည် လက်ထဲကိုင်ထားသော ဖန်ခွက်ကို စားပွဲပေါ်သို့ ဒုတ်ခနဲမြည်အောင် ချသည်။ မာမီဖြစ်သူအား မကျေမနပ်နှင့် လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး “မာမီက အဲဒါနဲ့ပဲ တပည့်ဖြစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တယ်ပေါ့ .. မာမီ မလွန်လွန်းဘူးလား .. သူက သူ့ဟင်းချက်နည်းတွေ မာမီကို ပေးခဲ့တာတောင် မာမီက သူ့အတွက် မစဉ်းစားခဲ့ဘူး .. ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့၊ အလေးထားတဲ့ တပည့်တစ်ယောက်အပေါ် ဒီလိုပဲ ဆက်ဆံရသလား .. လောကမှာ ဆရာတွေ အားလုံး ဒီလိုချည်းပဲလား” လေသံမာမာနှင့် တောက်လျှောက် နမ်းစတော့ ပြောသွားသည့် ရွှေပိုးအိမ်ကြောင့် ဒေါ်စိုးသူဇာ သမီးဖြစ်သူကို မျက်မှောင်ကုတ်၍ ကြည့်မိသည်။
“နေပါဦး သမီး .. တခြားတစ်ယောက် ရှိသေးလို့လား” “အော် .. မ .. ဟုတ်ပါဘူး .. ဟို ဟိုလေ” စိတ်ထဲရှိသည့်အတိုင်း ပြောမိပြီးမှ ရွှေပိုးအိမ် သူမစကားကို ပြန်လျှောချလိုက်ရသည် “ဒါဆို မာမီက ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ” “သူက မနက်ဖြန်ဆို အော်ဇီသွားတော့မှာတဲ့ .. အဲဒါ မာမီလည်း လိုက်သွားချင်တယ် .. ဆိုင်ကိုတော့ မာမီသူ့ငယ်ချင်း ဖြစ်တဲ့ မရွှေစင်က တာဝန်ဆက်ယူပြီး ဖွင့်ထားလိမ့်မယ် .. အများအမြင်ကောင်းအောင်တော့ ပိုင်ဆိုင်မူ ပြောင်းသွားတယ်လို့ ကြေငြာထားတယ်” “မာမီ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတာ သူက သိလို့လား” “ဟင့်အင်း .. သူ့နဲ့ စကားမပြောဖြစ်သေးဘူး” “သူက မာမီလိုက်လာတာကို လက်မခံဘူးဆိုရင်ကော” “ဒါဆိုရင်တော့လဲ မာမီ လေ့လာစရာရှိတာတွေ လေ့လာယုံပဲပေါ့” “အင်း … တကယ်လို့ သူက မာမီကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင်ကော .. မာမီ သူ့ကို လက်ထပ်မှာလား” “ကောင်မလေး .. အဲဒီကိစ္စ နင့်အတွက်တော်တော်အရေးကြီးနေလား” မျက်စောင်းထိုးကာ ခပ်ငေါက်ငေါက်ပြောလိုက်ရင်း ဒေါ်စိုးသူဇာ လက်ထဲရောက်နေသည့် ခွက်ထဲက အရည်တွေကို တရှိန်ထိုးမော့သောက်ပစ်လိုက်ပါတော့သည်။ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၏ ထွက်ခွာရာဌာနသည် ခရီးသည်များ၊ လိုက်ပါပို့ဆောင်သူများနှင့် ပျားပန်းခတ်မျှ လှုပ်ရှားအသက်ဝင်နေလေသည်။
“ကဲ .. အဖေသွားပြီ” “အေး .. ကောင်းကောင်းသွား .. ဟိုရောက်ရင် ဖုန်းဆက်ဦး” “ဆက်မှာပါ .. အဖေလဲ ကောင်းကောင်းပြန်ဦး” “အမယ် .. မင်းကပဲ ပြောရတယ် ရှိသေး” ဦးရဲသူ တုံ့ပြန်ပြောရင်း ရယ်ကျဲကျဲ မျက်နှာပေးနှင့် ရှိနေသူ ရဲဝေယံရဲ့  ပုခုံးအား လက်သီးဖြင့် ခပ်ဖွဖွထိုးသည် “အဖေ့ဇာတ်လမ်းကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ ကျနော် ပြန်လာမှာပါ .. အဲဒါတော့ ကျနော် မမေ့ပါဘူး .. ကိုယ့်အဖေ နှစ်နှစ်ကျော်ကျော်ကြာအောင် ရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပဲလေ .. ကဲ .. သွားပြီ အဖေ .. တာ့တာ” လက်ကလေးပြရင်း နှုတ်ဆက်သွားသည့် ရဲဝေယံအား ဦးရဲသူ ယောင်တောင်တောင်နှင့် လက်ပြရင်း နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ ရဲဝေယံ နောက်ဆုံးပြောသွားသည့်စကားက သူ့ရင်ထဲရှိ မကျက်သေးသည် ဒဏ်ရာကို အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်တည်လာအောင် နှိုးဆွသလို ဖြစ်သည်။ သတိရတယ် .. လွမ်းတယ် .. ရွှေပိုးအိမ်ရယ် .. မင်း ဘယ်မှာလဲကွယ် ..။ “ကဲ .. သမီး မာမီသွားတော့မယ်” “ဟုတ်ကဲ့ .. မာမီ” အသံငယ်ငယ်လေးနှင့် တုံ့ပြန်လိုက်ရင်း ဒေါ်စိုးသူဇာအား ရွှေပိုးအိမ် သိုင်းဖက်သည်။ ဒေါ်စိုးသူဇာက သူမကို ပြန်ဖက်ထားရင်း ကျောပြင်ကိုလက်ဝါးပြင်နှင့် နူးညံ့စွာသပ်ပေးလေသည် “သမီးတစ်ယောက်ထဲတော့ ဖြစ်မနေပါဘူးနော်” “မဖြစ်ပါဘူး မာမီရယ် .. စိတ်ချလက်ချသွားပါ .. သမီး ကလေးလေး မဟုတ်တော့ပါဘူး” “အဲ့ဒီ ကလေးလေး မဟုတ်လို့ ပြောနေရတာပဲ .. ဒါပဲနော် မာမီ ပြန်လာတဲ့ အချိန်ကြရင် ပီကာဆိုကို တွေ့ချင်တယ်” “အင်းပါ .. မာမီရယ် .. သွားတော့ လေယာဉ်ချိန် နောက်ကျနေလိမ့်မယ်” နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နှင့် ထွက်သွားသည့် မာမီရဲ့ နောက်ကျောကို ကြည့်ရင်း ရွှေပိုးအိမ် မျက်ဝန်းများ မှုန်ရီေ၀၀ါးလာသည်။ မျက်ရည်ကြည်များ အောက်ဘက်သို့ လိမ့်မကျလာခင် လက်ချောင်းလေးကို ကွေး၍ သုတ်လိုက်သည်။ မသိသည့် လူကတော့ ထင်ကြလိမ့်မည်။
မာမီဖြစ်သူနှင့် ခွဲရလို့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ငိုနေသည်လို့။ တကယ်တော့ ထိုအချက်က မမှန်ပါ။ ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ မျက်ရည်များက မာမီပြောသွားသည့် ပီကာဆို ဆိုသော ညွှန်းဆိုချက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ငွေ့ရည်ဖွဲ့သလိုေ၀၀ါးနေသည့် မျက်ဝန်းထဲတွင် ဆရာဦးရဲသူရဲ့ ပုံရိပ်ကို အလိုလို မြင်ယောင်လာသည်။ “ရွှေပိုးအိမ် ” “ဟင် .. ဆရာ ” သူမနာမည်ကို ခပ်ကျယ်ကျယ် အော်ခေါ်ခံရမှုကြောင့် ရွှေပိုးအိမ် မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့် အတင်းပွတ်ကြည့်သည်။ အယ် .. ဒါ တကယ် .. သူမ မြင်ယောင်မြင်မှား ဖြစ်နေတာ မဟုတ်။ ဆရာက သူမနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ရပ်ပြီး သူမကို စိုက်ကြည့်နေတာပဲ။ ရွှေပိုးအိမ် နှုတ်မှ ဆရာလို့ အော်ခေါ်ရင်း ခြေလှမ်းတွေက အလိုလိုရွေ့သွားသည်။ သူမနှင့် တစ်ချိန်ထဲတစ်ပြိုင်ထဲမှာပင် ဦးရဲသူက သူမဆီသို့ ပြေးလာသည်။ နှစ်ယောက်သား လမ်းခုလတ်တွင် ဆုံကြသည်။ ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ ကိုယ်ကလေးက ဦးရဲသူ ရင်ခွင်ထဲပြေးဝင်သွားသလို၊ ဦးရဲသူကလည်း သူမအား လွတ်ထွက်သွားမှာစိုးသည့်အလား တင်းကျပ်စွာ ဖက်တွယ်ထားလေသည်။
ထို့နောက်တွင်တော့ … လေဆိပ်ပေါက်ဝသို့ လက်ချင်းတွဲကာ ထွက်လာကြသည့် ရွှေပိုးအိမ်တို့ နှစ်ယောက်သား ကားရပ်နားရာဌာနသို့ သွားမည်ပြင်တော့ ဦးရဲသူ သူမလက်ကို ဆွဲထားရင်း တားသည်။ “ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာ” “ဆရာ့ကားနဲ့ပဲ သွားကြရအောင်လေ” ရွှေပိုးအိမ်က ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုပြီး မျက်မှောင်လေးကျုံ့ ၍ မေးခွန်းထုတ်လိုက်စဉ် စပ်ဖြီးဖြီးရုပ်နှင့် ဦးရဲသူ ပြောလိုက်သည့်စကားကြောင့် မျက်စောင်းထိုးယုံမက လက်ကပါ ခါးကိုဆွဲလိမ်ပြီးသား ဖြစ်သွားလေသည်။ “လေဆိပ်နဲ့ အနီးဆုံး တည်းခိုခန်းမှာ စာအကြောင်းပေအကြောင်း ဆွေနွေးရအောင်လို့လေ .. ဟီး” နောက်တစ်နှစ်ခန့် ကြာပြီးသောအခါ … “အခုလို ကျနော်ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားတဲ့ပွဲမှာ လာရောက် အားပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်နှင့်တကွ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေ အပေါင်းကို ဒီနေရာကပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ အနူးအညွှတ် ပြောပါရစေ .. တလက်စထဲ အခုရိုက်မယ့် ရုပ်ရှင်မှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် မင်းသား၊ မင်းသမီးများ အပြင် အရေးပါတဲ့လူတစ်ယောက်ကို စင်ပေါ်သို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် .. အားလုံးပဲ လက်ခုပ်သြဘာလေး ပေးပေးကြပါ … သူကတော့ ..” စတိတ်စင်မြင့်ပေါ်ကနေ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဟန်နှင့် အားရပါးရ ပြောနေသည့် ဦးရဲသူရဲ့ စကား ခေတ္တခဏရပ်သွားသည်နှင့် အမျိုးသားဇာတ်ရုံအတွင်းရှိ ထိုင်ခုံတန်းများဆီသို့ မီးဆလိုက်နှစ်ခုက ဟိုမှဒီသို့ ထိုးကာပြသည်။
စက္ကန့်ပိုင်းမျှ လူရှာသလို ရှာနေသည့် ဆလိုက်တန်းနှစ်ခုသည် ဟိုဒီပြေးနေရင်းမှ ရှေ့ဆုံးတန်းအလယ်တွင် ထိုင်နေသည့် ကြက်သွေးရောင် ပွဲတက်ဝတ်စုံရှည်နှင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆီမှာ ရပ်တန့်သွားသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ဦးရဲသူထံမှ စကားသံကို ထပ်မံ၍ ကြားရသည်။ “သူကတော့ တခြားသူ မဟုတ်ပါဘူး .. ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို ဇာတ်ညွှန်းပြန်ဆွဲပေးထားတဲ့ တက်သစ်စ စာရေးဆရာမ ရွှေပိုးအိမ် ဖြစ်ပါတယ်” ရွှေပိုးအိမ်သည် ထိုင်နေရာမှ ထရပ်လိုက်မည်အပြုတွင် ဝေါခနဲ ထွက်လာသည့် လက်ခုပ်သြဘာသံများနှင့် ချီးကျူးအားပေးသံများကြောင့် ကြက်သီးမွေးညင်းများတောင် ထသည်။ ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်မှုက ရင်ထဲကို အပြည့်အ၀ လွှမ်းမိုးထားရာ သူမ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပါးစပ်ကို အုပ်၍တောင် ထားရသည်။ စတိတ်စင်ပေါ် ရောက်ရန် လျှောက်လာသည်တွင်လည်း လဲပြိုခြင်း မပြုရအောင် မနည်းပင် ထိန်းထားရသည်။ တော်သေးသည်။ ဆရာက သူမအား စတိတ်စင်အစွန်းထိ ထွက်ကြိုကာ လက်ဖြန့်ပြီး ခေါ်လို့ ….။ ဆရာဦးရဲသူရဲ့ လက်ကို သူမ ရဲရဲကြီး ဆုပ်တွယ်လိုက်သောအခါ ပရိသတ်ရဲ့ သြဘာသံများက ခုနကထက်ပင် ပို၍တိုးလာသည်။ ရွှေပိုးအိမ် ဆရာ့အား အချစ်ရည်လွှမ်းသည့် အကြည့်နှင့်ကြည့်မိသလို၊ ဆရာဦးရဲသူကလည်း သူမအား ကြင်နာနားလည်သောအကြည့်နှင့် ပြန်၍ စိုက်ကြည့်နေသည်သာ …။ နှစ်ယောက်သား လက်ချင်းတွဲ၍ တစ်ယောက်မျက်နှာကို တစ်ယောက် ကြည်ကြည်နူးနူး ကြည့်ရင်း ခန်းမအပြင်ဘက်သို့ လျှောက်လာစဉ် ဦးရဲသူရဲ့ ဖုန်းမှ ခေါ်သံကို ကြားရသည်။ ဦးရဲသူ ဖုန်းဖြေဖို့ ပြင်လိုက်စဉ် ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ ဟန်းဖုန်းမှလည်း အသံမြည်လာသည်။
ဦးရဲသူ ….. သား .. မင်းရောက်လာပြီလား .. မင်းလေယာဉ်က နောက်ကျနေတာလား ရဲဝေယံ ….. လေယာဉ်က နောက်ကျတာမဟုတ်ဘူး .. ကာစတမ်က ရစ်နေလို့ .. အဖေ့အတွက် ယူလာတဲ့ အရက်ပုလင်းကို မြင်သွားပြီး တောင်းနေတာလေ … ဒါနဲ့ ပွဲကပြီးသွားပြီလား ရွှေပိုးအိမ် ….. မာမီ .. အခု ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ .. သမီးတို့ပွဲက ပြီးတောင်ပြီးသွားပြီ ဒေါ်စိုးသူဇာ ….. လာနေပြီ သမီးရေ … သူ့အဖေဖို့ ၀ယ်လာတဲ့ အရက်ပုလင်းကို ကာစတမ်က ရစ်နေလို့လေ ဦးရဲသူ …. ပြီးသွားပြီ .. ထားလိုက်ပါတော့ … တို့တစ်တွေ တိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်း ရီဆော့ ကိုပဲ တန်းသွားကြတာပေါ့ ရဲဝေယံ …. ကောင်းတာပဲ အဖေ … အဖေ့ကိုလဲ သားဆရာမနဲ့ သေချာမိတ်ဆက်ပေးလို့ရတာပေါ့ …. သား ဘာဖြစ်လို့ ဆရာမကို တန်းတန်းစွဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အဖေ သိသွားမယ် .. အခုပဲ ၀င်းထဲကို တက်စီဝင်လာပြီ .. ခနလေးစောင့် အဖေ ရွှေပိုးအိမ် …. အခု ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ … အမေ့ကောင်လေးရော အတူတူလာတာ မှတ်လား ဒေါ်စိုးသူဇာ ….. ကောင်လေး မဟုတ်ဘူး .. သမီးထက်ကြီးတယ်နော် … ဒါပဲ .. တွေ့ရင် နောက်နောက်ပြောင်ပြောင် လုပ်မနေနဲ့ … မာမီတို့က ရီဆော့ မှာ အတူနေကြဦးမှာ ဆိုတာ မမေ့နဲ့ .. ခနနေ ရောက်တော့မှာ ဦးရဲသူ …. အေးပါ .. စောင့်ပါတယ် .. မင်း ဆရာမ ဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာလဲ ကြည့်ပါ့မယ် .. ငါ့တပည့်မ ဘယ်လောက်ချောတယ်ဆိုတာလဲ မင်းကို ပြပါဦးမယ်ရွှေပိုးအိမ် …. မနောက်ရဲပါဘူး မာမီရယ်… ကိုယ့်မာမီ ဇီဇာကြောင်ကြီးရဲ့ အသည်းကို ပျော့ကျသွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့သူကို သမီးကလဲ မြင်ချင်နေတာပါ ….နောက်ပြီး မာမီကိုလဲ သမီးရဲ့ ပီကာဆိုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးရဦးမှာ ရွှေပိုးအိမ်က တခစ်ခစ်နဲ့ ရယ်ရင်း ဖုန်းချလိုက်သလို၊ ဦးရဲသူကလည်း တဟင်းဟင်းနှင့် ရယ်ရင်း ဖုန်းချလိုက်သည်။ ထို့နောက်တွင် သူတို့နှစ်ယောက်က လက်ချင်းပြန်ချိတ်ရင်း ကဇာတ်ရုံရဲ့ ဝင်ပေါက်ကျယ်ကြီးဆီသို့ နှစ်ယောက်သား တွဲလျှောက်လာခဲ့သည်။ ၀င်ပေါက်နားရောက်လို့ အပြင်ကို ခြေလှမ်းလှမ်းမည်အပြု လှေကားထစ်များမှ တက်လာကြသည့် စုံတွဲကို အမြင်တွင် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေ အလိုလို ရပ်သွားသည်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် လက်ချင်းတွဲထားရင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တွန်းထိုးကာ ကျီစယ်လာကြပုံ ရသော ထိုအတွဲသည်လည်း သူတို့အား လှမ်းအမြင်တွင် ခြေလှမ်းတွေရပ်တန့်သည်။ လှေကားထစ်များထိပ်မှ စုံတွဲတစ်တွဲနှင့် လှေကားထစ်အောက်မှ စုံတွဲတစ်တွဲသည် အံ့အားသင့်သည့် မျက်နှာတွေနှင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် လက်ညိုးထိုးရင်း မျက်လုံးအပြူးသား ဖြစ်နေကြသည်ကို လမ်းသွားလမ်းလာများက အထူးတလည် ကြည်ရှုသွားကြသည်။ ကိုယ်စီကိုယ်စီလည်း သို့လောသို့လောနှင့် တီးတိုးစကားဆိုသွားကြသည်။ သို့သော် အဆိုပါ လူလေးယောက်သည်ကား ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိမပြုမိဟန်နှင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် လက်ညိုးထိုးလျှက်သာ ရှိနေကြလေတော့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ မှ အတန်ငယ်သွားရသော နေရာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ရီဆော့ တစ်ခုရဲ့ ဘန်ဂလို တစ်ခုအတွင်း … ကပ်လျက်ဖြစ်နေသည့် အိပ်ခန်းနှစ်ခုရဲ့  ကုတင်အသီးသီးပေါ်မှ နေ၍ အတွဲနှစ်တွဲသည် ဟိုဘက်ဒီဘက် စကားများနေကြသည်။
“အဖေ … ဘယ်လိုဖြစ်လို့ .. အဖေတို့ဘက်က တဒုန်းဒုန်းနဲ့ မြည်နေရတာလဲ” “ဒုန်း … အင့် … အင့် … ဒုန်း … ဆရာ … ဆရာ့ .. အာ့ .. ကောင်းတယ်” “ဟ .. မင်းတို့ ဘက်ကလဲ ဘာဖြစ်လို့ တကျွီကျွီနဲ့ ဒီလောက်တောင် အသံထွက်နေရတာလဲ” “မောင် …. အာ့ … ထိတယ် …. အာ့ … အင်း … လုပ် … လုပ်” “ကုတင်ဘောင်က နံရံနဲ့ ကပ်နေတာလေ .. ငါ က ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟ” “သားလဲ သူတို့ ပေးတဲ့ မို့ရာပေါ်မှာပဲ လုပ်နေတာလေ … အဖေ့ ကုတင်ကြီး အဆင်မပြေရင် အောက်ဆင်းလုပ်ပေါ့” “ဟင် .. မင်း … မင်း … ကဲ .. ကွာ” “ဒုန်း … အာ့ .. ဆရာ … အဲဒါ ပိုကောင်းတယ် … ဆောင့် … မြန်မြန် … ကောင်းတယ် … ဒုန်း … ဒုန်း” “သမီး … နင် ဘယ်လို ဖြစ်နေတာလဲ … အင့် … အာ့ … ဒီဘက်မှာ မာမီ ရှိတာလဲ .. အင့် … သိ .. ဦး” “အာ့ … မာမီကလဲ … ဒီမှာ သမီးကောင်း .. အာ့ .. နေတာကို .. ဆရာ့ဟာကြီးက အကြီးကြီးပဲ .. တအား ထိတယ် … မာမီ ဘာသိလို့လဲ … အာ့” “အို့ … မောင် .. ဆောင့် … ဆောင့်တော့ကွာ … အားမနာနဲ့ … မင်းဟာကြီးနဲ့ ထိုးမွှေပေးတော့ …. အာ့ ကောင်းတယ် … အဲ့လို ဆက်တိုက်သာဆောင့် … တစ်စက္ကန့်မှာ နှစ်ချက်ရအောင် ဆောင့် … အာ့ … ဟုတ်ပြီ” “ဆရာ … သမီး ပြီးတော့မယ် … အာ့ … အာ့ … မြန်မြန်လေး … တစ်စက္ကန့်မှာ သုံးချက်ရအောင် ဆောင့်ပေး .. အာ့” “မောင် … တစ်စက္ကန့်မှာ ….” “ဆရာ … တစ်စက္ကန့်မှာ …” ကောင်တာသို့ လှမ်းမှာထားသော အစားအသောက်များအား ဘန်ဂလိုရှိရာသို့ အရောက်လိုက်ပို့ပေးသည့် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကောင်ကလေးသည် ဟင်းပန်းကန်များထည့်ထားသည့် လင်ဗန်းကို ကိုင်ထားရင်း ဒူးတွေ တုန်လာရှာသည်။
ဘန်ဂလိုရှေ့က တံခါးဝတွင် ရပ်နေရင်း သူ့ခမျာ ဘဲလ်ကို နှိပ်ရမလား၊ ဒီအတိုင်းပဲ ဟင်းပန်းကန်တွေ အပေါက်ဝတွင် ချထားရင်း ပြန်သွားရမလား ဆုံးဖြတ်လို့မရ။ တစတစ အထဲမှ ကြားရသည့် အသံတွေက အရှိန်အဟုန် မြင့်လာသည်တွင် ဒူးတွင်မကဘဲ လက်တွေပါ တုန်လာသည်။ နောက်ဆုံး ဆွဲဆွဲငင်ငင်အော်လိုက်သည့် မိန်းမသံနှစ်ခုတွင် လင်ဗန်းထဲထည့်ထားသည့် ဟင်းချိုပန်းကန်သည် ဘောင်ဘင်ခတ်ကာ အပြင်ဘက်သို့ ဟင်းရည်တွေ စင်ကျသည်။ “အားးးးးးးးးးး !!!” ဘောင်းဘီဂွကြားကို ပေစင်သွားသည့် ဟင်းချိုရည်ပူကြောင့် ၀န်ထမ်းကောင်လေး မချိမဆန့်နှင့် အသံကုန်ခြစ်အော်မိသည်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ပြိုင်ပွဲဆင်နွှဲနေသလို ရေကုန်းရေခမ်း ကြိုးစားနေသည့် ယောက်ျားသားနှစ်ယောက်သည် ဘန်ဂလို အပြင်ဘက်မှ အခြားသော ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အားခနဲ အော်သံကြီးကြောင့် လှုပ်ရှားနေမှုတွေ ရပ်ကာ ကြက်သေသေကုန်ကြသည်။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ နားမလည်ကြတော့ပါချေ ….ပြီးပါပြီ။